Ilipatikana 1001 ~ मत्ती, मार्क, लूका, जन, प्रेरित, रोमी, १ कोरिन्थी, २ कोरिन्थी, गलाती, एफिसी, फिलिप्पी, कलस्सी, १ थिस्सलोनिकी, २ थिस्सलोनिकी, १ तिमोथी, २ तिमोथी, तीतस, फिलेमोन, हिब्रू, जेम्स, १ पत्रुस, २ पत्रुस, १ यूहन्ना, २ यूहन्ना, ३ यूहन्ना, यहूदा, प्रकाश
अब्राहामका पुत्र, दाऊदका पुत्र, येशू ख्रीष्‍टको वंशावली:
याकूब तिनै योसेफका पिता थिए, जसकी पत्‍नी मरियम थिइन्‌। यिनै मरियमबाट येशूको जन्‍म भयो, जो ख्रीष्‍ट कहलाइन्‍छन्‌।
तिनले एउटा पुत्र जन्‍माउनेछिन्, र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्‍नेछौ, किनभने उहाँले आफ्‍ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ।”
मरियमले पुत्र नजन्‍माउञ्‍जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्‌। योसेफले उहाँको नाउँ येशू राखे।
हेरोद राजाको समयमा यहूदियाको बेथलेहेममा जब येशूको जन्‍म भयो, पूर्वका ज्‍योतिषीहरू यरूशलेममा आइपुगे र तिनीहरूले भने,
तब येशू गालीलबाट यूहन्‍नाकहाँ तिनीद्वारा बप्‍तिस्‍मा लिन यर्दनमा आउनुभयो।
तर येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “अहिलेलाई यसै हुन देऊ। किनभने यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पूरा गर्नुपर्दछ।” तब यूहन्‍ना राजी भए।
अनि येशू बप्‍तिस्‍मा लिएर तुरुन्‍तै पानीबाट माथि निस्‍कनुभयो, अनि स्‍वर्ग उघ्रियो, र उहाँले परमेश्‍वरका आत्‍मालाई ढुकुरझैँ ओर्लिरहनुभएको र आफूमाथि आइरहनुभएको देख्‍नुभयो।
तब दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्‍माद्वारा येशू उजाड-स्‍थानमा लगिनुभयो।
तर येशूले जवाफ दिनुभयो, “लेखिएको छ, ‘मानिस रोटीले मात्र होइन, तर परमेश्‍वरको मुखबाट निस्‍केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ’।”
तब येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “शैतान, तँ दूर होइजा! किनभने लेखिएको छ, ‘तैंले परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वरलाई दण्‍डवत्‌ गर्नू, र उहाँको मात्र सेवा गर्नू’।”
यूहन्‍ना थुनामा परे भन्‍ने सुनेर येशू गालीलतिर लाग्‍नुभयो,
त्‍यस बेलादेखि प्रचार गर्दै येशूले भन्‍न लाग्‍नुभयो, “पश्‍चात्ताप गर, किनभने स्‍वर्गको राज्‍य नजिक आइपुगेको छ।”
अनि येशू तिनीहरूका सभाघरहरूमा सिकाउँदै, राज्‍यको सुसमाचार प्रचार गर्दै, र मानिसहरूमा भएका हरेक किसिमका रोग र शारीरिक दुर्बलता निको पार्दै सारा गालीलभरि घुम्‍नुभयो।
येशूले यी कुरा भनिसक्‍नुभएपछि भीड उहाँका शिक्षा सुनेर छक्‍क पर्‍यो।
तब येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “कसैलाई नभन्‍नू। तर जाऊ, र आफूलाई पूजाहारीकहाँ देखाऊ, र मोशाले आज्ञा गरेको भेटी चढ़ाऊ, र मानिसहरूलाई प्रमाण होस्‌।”
येशू कफर्नहुममा पस्‍नुहुँदा एक जना कप्‍तान उहाँकहाँ आएर बिन्‍ती गर्न लागे। तिनले भने,
तिनको कुरा सुनेर येशूले आश्‍चर्य मान्‍नुभयो, र उहाँको पछि आउनेहरूलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, इस्राएलमा पनि यति ठूलो विश्‍वास मैले भेट्टाएको छैनँ।
तब येशूले कप्‍तानलाई भन्‍नुभयो, “जाऊ, जस्‍तो तिमीले विश्‍वास गरेका छौ, त्‍यस्‍तै तिमीलाई होस्‌।” अनि त्‍यो नोकर त्‍यही घड़ी निको भयो।
पत्रुसको घरमा आउनुभएपछि येशूले तिनकी सासूलाई जरोले थलिएर पस्रिएकी देख्‍नुभयो।
जब येशूले आफ्‍नो वरिपरि ठूला भीड़हरूलाई देख्‍नुभयो, उहाँले तालको पारि जाने आज्ञा दिनुभयो।
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “स्‍यालका दुला र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुँड़ हुन्‍छन्, तर मानिसको पुत्रको लागि त शिर ढल्‍काउने ठाउँ पनि छैन।”
तर येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “मेरो पछि आऊ, मुर्दाले नै तिनका आफ्‍ना मुर्दा गाडून्‌।”
अकस्‍मात्‌ तालमा ठूलो आँधी आयो, र छालले डुङ्गालाई ढाक्‍न लाग्‍यो। येशू निदाइरहनुभएको थियो।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “अल्‍पविश्‍वासी मानिस हो, तिमीहरू किन डराउँछौ?” तब उठेर उहाँले बतास र समुद्रलाई हकार्नुभयो, र आँधी बिलकुल शान्‍त भयो।
तब जम्‍मै सहर नै येशूलाई भेट गर्न उल्‍टेर आयो, र उहाँलाई देखेर मानिसहरूले तिनीहरूको इलाकाबाट जानुहोस्‌ भनी उहाँलाई बिन्‍ती गरे।
त्‍यसपछि येशू डुङ्गामा चढ़ेर पारि जानुभयो, र उहाँको आफ्‍नो सहरमा आउनुभयो।
मानिसहरूले खाटमा पस्रिरहेको एक जना पक्षाघातीलाई उहाँकहाँ ल्‍याए। येशूले तिनीहरूको विश्‍वास देखेर पक्षाघातीलाई भन्‍नुभयो, “छोरा, साहस गर। तिम्रा पाप क्षमा भए।”
येशूले तिनीहरूको विचार बुझेर भन्‍नुभयो, “तिमीहरू किन आफ्‍ना हृदयमा दुष्‍ट विचार गर्दछौ?
येशू त्‍यहाँबाट जानुहुँदा मत्ती भन्‍ने एक जना मानिसलाई कर उठाउने अड्डामा बसिरहेको देख्‍नुभयो, र तिनलाई भन्‍नुभयो, “मेरो पछि लाग।” अनि तिनी उठे र उहाँको पछि लागे।
उहाँ खान बस्‍नुभएको बेला, धेरै जना कर उठाउनेहरू र पापीहरू आएर येशू र उहाँका चेलाहरूसँग खान बसे।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “जबसम्‍म दुलहा जन्‍तीहरूसँग रहन्‍छन्, के तिनीहरू शोक मनाउँछन्‌ र? तर ती दिन आउनेछन्‌ जब दुलहा तिनीहरूबाट लगिनेछन्‌। तब तिनीहरू उपवास बस्‍नेछन्‌।
येशू उठ्‌नुभयो र आफ्‍ना चेलाहरूसँग तिनको पछि लाग्‍नुभयो।
फनक्‍क फर्की हेर्दा येशूले त्‍यस स्‍त्रीलाई देख्‍नुभयो, र भन्‍नुभयो, “छोरी, साहस गर, तिम्रो विश्‍वासले तिमीलाई निको पारेको छ।” त्‍यो स्‍त्री त्‍यही घड़ी निको भई।
अनि जब येशू शासकको घरमा आइपुग्‍नुभयो, उहाँले बाँसुरी बजाउनेहरू र भीड़ले खैलाबैला मचाइरहेका देख्‍नुभयो।
येशू त्‍यहाँबाट जानुहुँदा दुई जना अन्‍धाहरू “हे दाऊदका पुत्र, हामीमाथि दया गर्नुहोस्‌” भनी कराउँदै उहाँको पछिपछि लागे।
उहाँ घरमा पस्‍नुभएपछि ती अन्‍धा मानिसहरू उहाँकहाँ आए। येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “म यो गर्न सक्‍छु भनी के तिमीहरू विश्‍वास गर्दछौ?” तिनीहरूले उहाँलाई भने, “ज्‍यू, प्रभु।”
अनि तिनीहरूका आँखा खोलिए। येशूले यसो भनेर तिनीहरूलाई कड़ा आज्ञा दिनुभयो, “यो कुरो कसैले थाहा नपाओस्‌।”
येशू समस्‍त सहरहरू र गाउँहरूतिर तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा दिँदै, राज्‍यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र हरेक किसिमका रोग र दुर्बलताहरू निको पार्दै हिँड्‌नुभयो।
सिमोन कनानी र यहूदा इस्‍करियोत, जसले येशूलाई पक्राइदियो।
येशूले यी बाह्र चेलालाई यसो भनी आज्ञा दिएर पठाउनुभयो, “अन्‍यजातिहरूका माझमा नजाओ, र सामरीहरूका सहरमा नपस।
आफ्‍ना बाह्रै चेलाहरूलाई आदेश दिइसक्‍नुभएपछि येशू त्‍यहाँबाट तिनीहरूका सहरहरूमा सिकाउन र सुसमाचार प्रचार गर्नलाई जानुभयो।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो “तिमीहरूले सुनेका र देखेका कुराहरू यूहन्‍नालाई भनिदेओ,
अनि तिनीहरू गएपछि येशूले यूहन्‍नाको विषयमा भीड़लाई भन्‍न लाग्‍नुभयो, “तिमीहरू उजाड-स्‍थानमा के हेर्न निस्‍क्‍यौ? के बतासले हल्‍लाइराखेको निगालोलाई?
त्‍यस बेला येशूले भन्‍नुभयो, “हे पिता, स्‍वर्ग र पृथ्‍वीका प्रभु, म तपाईंमा धन्‍यवाद चढ़ाउँछु, किनकि तपाईंले यी कुरा बुद्धिमान्‌ र समझदारबाट गुप्‍त राख्‍नुभयो, तर बालकहरूलाई ती प्रकट गर्नुभयो।
त्‍यस समय येशू शबाथमा अन्‍नका खेतहरूबाट भएर जाँदैहुनुहुन्‍थ्‍यो। उहाँका चेलाहरू भोकाएका थिए र अन्‍नका बाला टिप्‍दै खान लागे।
त्‍यहाँ एउटा हात सुकेको मानिस थियो। तिनीहरूले येशूलाई दोष लगाउने अभिप्रायले उहाँलाई सोधे, “के शबाथमा कसैलाई निको पार्नु उचित छ?”
तब त्‍यो कुरा थाहा पाएर येशू त्‍यहाँबाट गइहाल्‍नुभयो, र धेरै जना उहाँको पछि लागे, र उहाँले तिनीहरू सबैलाई निको पार्नुभयो,
तब उहाँकहाँ भूत लागेको एक जना अन्‍धो र गूँगो मान्‍छे ल्‍याइयो। येशूले त्‍यसलाई निको पार्नुभयो, यतिसम्‍म कि, त्‍यो गूँगो मानिस बोल्‍ने र देख्‍ने भयो।
येशू भीड़हरूसँग बोलिरहनुभएको बेला, उहाँका आमा र भाइहरू बाहिर खड़ा थिए, र उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्‍थे।
तब एक जनाले येशूलाई भन्‍यो, “हेर्नुहोस्, तपाईंकी आमा र तपाईंका भाइहरू बाहिर खड़ा छन्, र तपाईंसँग कुरा गर्न चाहन्‍छन्‌।”
तर उहाँसँग बोल्‍नेलाई येशूले भन्‍नुभयो, “मेरी आमा को हुन्‌? मेरा भाइहरू को हुन्‌?”
त्‍यही दिन येशू घरबाट निस्‍केर समुद्रको किनारमा बस्‍नुभयो।
येशूले फेरि तिनीहरूलाई अर्को दृष्‍टान्‍त सुनाउनुभयो: “स्‍वर्गको राज्‍य एक जना मानिसजस्‍तो हो, जसले आफ्‍नो खेतमा असल बीउ छर्‍यो।
येशूले तिनीहरूलाई अर्को दृष्‍टान्‍त भन्‍नुभयो, “स्‍वर्गको राज्‍य रायोको दानाजस्‍तो हो, जो एक जना मानिसले लगेर आफ्‍नो बारीमा रोप्‍‍यो।
येशूले यी सबै कुरा मानिसहरूलाई दृष्‍टान्‍तमा भन्‍नुभयो। विनादृष्‍टान्‍त उहाँले तिनीहरूलाई केही पनि भन्‍नुभएन।
येशूले सोध्‍नुभयो, “के तिमीहरूले यी सबै कुरा बुझ्‍यौ?” तिनीहरूले उहाँलाई जवाफ दिए, “बुझ्‍यौं।”
यी दृष्‍टान्‍तहरू बताइसक्‍नुभएपछि येशू त्‍यहाँबाट जानुभयो।
अनि तिनीहरू उहाँसँग चिढ़िए। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “अगमवक्तालाई आफ्‍नै निज मुलुक र आफ्‍नै निज घरमा बाहेक अन्‍यत्र सबै ठाउँमा आदर हुन्‍छ।”
त्‍यस बेला गालील प्रदेशका शासक हेरोदले येशूको कीर्ति सुने।
त्‍यसपछि यूहन्‍नाका चेलाहरू आएर उनको मृत शरीर लगेर गाड़े। अनि तिनीहरूले गएर येशूलाई खबर दिए।
जब येशूले यो सुन्‍नुभयो उहाँ डुङ्गामा चढ़ी त्‍यहाँबाट अलग्‍गै एउटा एकान्‍त ठाउँमा जानुभयो। यो सुनेपछि भीड़ले सहरहरूबाट पैदलै उहाँलाई पछ्यायो।
तर येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिनीहरूलाई जानु आवश्‍यक छैन। तिमीहरूले नै यिनीहरूलाई खान देओ।”
तर येशूले झट्टै तिनीहरूलाई यसो भन्‍नुभयो, “साहस गर, म नै हुँ, नडराओ।”
उहाँले भन्‍नुभयो, “आऊ।” पत्रुस डुङ्गाबाट ओर्लेर येशूकहाँ जानलाई पानीमाथि हिँड्‌न लागे।
तब येशूले झट्टै हात पसारेर तिनलाई समातिहाल्‍नुभयो, र तिनलाई भन्‍नुभयो, “ए अल्‍पविश्‍वासी, किन शङ्का गर्‍यौ?”
यरूशलेमबाट आएका फरिसीहरू र शास्‍त्रीहरू येशूकहाँ आए, र भने,
तब येशू त्‍यहाँबाट निस्‍कनुभयो, र टुरोस र सीदोनका इलाकातिर जानुभयो।
येशूले त्‍यसलाई केही जवाफ दिनुभएन। उहाँका चेलाहरूले आएर उहाँलाई बिन्‍ती गरे, “यसलाई बिदा गर्नुहोस्, किनभने त्‍यो कराउँदै हाम्रो पछि लागिरहिछे।”
तब येशूले त्‍यसलाई जवाफ दिनुभयो, “ए नारी, तिम्रो विश्‍वास ठूलो रहेछ। तिमीले इच्‍छा गरेबमोजिम तिमीलाई होस्‌।” त्‍यसकी छोरी त्‍यही घड़ी निको भइहाली।
येशू त्‍यहाँबाट निस्‍केर गालील समुद्रको किनार भएर जानुभयो, र पहाड़माथि उक्‍लेर त्‍यहाँ बस्‍नुभयो।
तब येशूले आफ्‍ना चेलाहरूलाई आफूकहाँ बोलाएर भन्‍नुभयो, “म यस भीड़लाई टिठ्याउँछु, किनभने यिनीहरू मसँग रहेका आज तीन दिन भयो, अनि यिनीहरूसित खानलाई केही छैन। यिनीहरूलाई भोकै पठाउन म चाहन्‍नँ। नत्रता तिनीहरू बाटोमा लखतरान होलान्‌।”
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरूसित कति वटा रोटी छन्‌?” तिनीहरूले भने, “सात वटा रोटी र केही ससाना माछा छन्‌।”
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “ध्‍यान देओ, फरिसी र सदुकीहरूको खमिरबाट होशियार रहो।”
येशूले यो थाहा पाएर भन्‍नुभयो, “ए अल्‍पविश्‍वासी हो! तिमीहरूसित रोटी छैन भनेर किन आपसमा बहस गर्छौ?
येशू कैसरिया फिलिप्‍पीको मुलुकमा आउनुभएपछि, उहाँले आफ्‍ना चेलाहरूलाई सोध्‍नुभयो, “मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्‍छन्‌?”
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “योनाको छोरो सिमोन, तिमी धन्‍य हौ। किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर स्‍वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नुभएको हो।
उहाँ ख्रीष्‍ट हुनुहुन्‍छ भनी कसैलाई नभन्‍नू भनी येशूले चेलाहरूलाई कड़ा आज्ञा दिनुभयो।
तब येशूले आफ्‍ना चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, “कोही मेरो पछि आउने इच्‍छा गर्दछ भने, उसले आफूलाई इन्‍कार गरोस्‌ र आफ्‍नो क्रूस उठाएर मेरो पछि लागोस्‌।
यसको छ दिनपछि येशूले पत्रुस, याकूब र तिनका भाइ यूहन्‍नालाई आफूसँग एउटा उच्‍च पहाड़माथि अलग्‍गै लैजानुभयो।
पत्रुसले येशूलाई भने, “हे प्रभु, हामी यहाँ भएको असल छ। तपाईंको इच्‍छा भए म यहाँ तीन वटा वासस्‍थान बनाउनेछु, एउटा तपाईंको निम्‍ति, एउटा मोशाको निम्‍ति र एउटा एलियाको निम्‍ति।”
तर येशूले आएर तिनीहरूलाई छोएर भन्‍नुभयो, “उठ, नडराओ।”
जब तिनीहरूले आफ्‍ना आँखा उचाले, येशूबाहेक तिनीहरूले अरू कसैलाई देखेनन्‌।
जब उहाँहरू पहाड़बाट ओर्लंदैहुनुहुन्‍थ्‍यो, येशूले तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो, “जबसम्‍म मानिसको पुत्र मृतकबाट जीवित भई उठ्‌दैन, तबसम्‍म तिमीहरूले यो दर्शनको कुरा कसैलाई नभन्‍नू।”
तब येशूले भन्‍नुभयो, “ए अल्‍पविश्‍वासी र भ्रष्‍ट पुस्‍ता, कहिलेसम्‍म म तिमीहरूका साथमा रहनेछु? कहिलेसम्‍म मैले तिमीहरूलाई सहनु? त्‍यसलाई यहाँ मकहाँ ल्‍याओ।”
येशूले त्‍यसलाई हकार्नुभयो, र भूतात्‍मा त्‍यसबाट निस्‍किगयो। त्‍यो केटो तुरुन्‍तै निको भयो।
तब चेलाहरूले येशूकहाँ गुप्‍तमा आएर भने, “हामीहरूले त्‍यसलाई किन निकाल्‍न सकेनौं?”
उहाँहरू गालीलमा भेला हुँदा येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “मानिसको पुत्र मानिसहरूका हातमा सुम्‍पिइनेछ।
तिनले भने, “हो, तिर्नुहुन्‍छ।” पत्रुस घरमा पसेपछि येशूले तिनलाई पहिले भन्‍नुभयो, “सिमोन, तिम्रो विचार के छ? पृथ्‍वीका राजाहरूले महसूल वा कर कोबाट उठाउँछन्‌? आफ्‍ना छोराहरूबाट कि अरूहरूबाट?”
“अरूहरूबाट,” पत्रुसले जवाफ दिए। येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “उसो भए छोराहरूले त छुट पाएका रहेछन्‌।
त्‍यही समय चेलाहरू येशूकहाँ आएर सोधे, “स्‍वर्गको राज्‍यमा सबैभन्‍दा महान्‌ को हो?”
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “म तिमीलाई भन्‍दछु, सात पल्‍ट होइन, तर सत्तरी गुणा सात पल्‍ट।
यी कुरा बोल्‍नुभएपछि येशू गालीलबाट यर्दनपारि यहूदाको इलाकातिर जानुभयो।
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “सबै मानिसले यो वचन ग्रहण गर्न सक्‍दैनन्, केवल तिनीहरूले मात्र सक्‍छन्‌ जसलाई यो दिइएको छ।
येशूले बालकहरूमाथि हात राखी प्रार्थना गरिदेऊन्‌ भनी मानिसहरूले तिनीहरूलाई उहाँकहाँ ल्‍याए। अनि चेलाहरूले ती मानिसहरूलाई हप्‍काए।
तर येशूले भन्‍नुभयो, “बालकहरूलाई मकहाँ आउन देओ, तिनीहरूलाई नरोक। किनभने स्‍वर्गको राज्‍य यस्‍तैहरूको हो।”
तिनले उहाँलाई भने, “कुन-कुनचाहिँ?” येशूले भन्‍नुभयो, “तैंले हत्‍या नगर्नू, तैंले व्‍यभिचार नगर्नू, तैंले चोरी नगर्नू, तैंले झूटो गवाही नदिनू।
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिमी सिद्ध हुन चाहन्‍छौ भने, गएर तिमीसित भएका सबै बेचेर दरिद्रहरूलाई देऊ, र तिमीले स्‍वर्गमा धन प्राप्‍त गर्नेछौ, अनि आएर मपछि लाग।”
अनि येशूले आफ्‍ना चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, स्‍वर्गको राज्‍यमा धनी मानिसलाई प्रवेश गर्नु गाह्रो पर्नेछ।
येशूले तिनीहरूमाथि दृष्‍टि लगाई भन्‍नुभयो, “मानिसहरूका लागि यो असम्‍भव छ, तर परमेश्‍वरको लागि सबै कुरा सम्‍भव छ।”
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, तिमीहरू जो मेरो पछि लागेका छौ, नयाँ सृष्‍टिमा जब मानिसको पुत्र आफ्‍नो महिमाको सिंहासनमा बस्‍नेछ, तब तिमीहरू पनि बाह्र सिंहासनमा बस्‍नेछौ, र इस्राएलका बाह्र कुलमाथि इन्‍साफ गर्नेछौ।
यरूशलेमतिर जाँदैहुनुहुँदा येशूले बाह्र चेलाहरूलाई अलग्‍ग लगेर बाटोमा तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो,
तर येशूले जवाफ दिनुभयो, “तिमीहरू के मागिरहेछौ सो जान्‍दैनौ। जुन कचौरा मैले पिउन लागेको छु, के त्‍यो तिमीहरू पिउन सक्‍छौ?” तिनीहरूले भने, “सक्‍छौं।”
तर येशूले तिनीहरूलाई आफूकहाँ बोलाएर भन्‍नुभयो, “तिमीहरूलाई थाहा नै छ, कि अन्‍यजातिका शासकहरूले तिनीहरूमाथि निरङ्‌कुश शासन गर्दछन्, र ठूलाठालुहरूले तिनीहरूमाथि अधिकार जमाउँछन्‌।
बाटोको छेउमा बसिरहेका दुई जना अन्‍धाहरूले येशू त्‍यो बाटो जाँदैहुनुहुन्‍छ भन्‍ने सुनेर यसो भनी चिच्‍च्‍याए, “हे प्रभु, दाऊदका पुत्र, हामीमाथि दया गर्नुहोस्‌।”
तब येशू अड़िनुभयो र तिनीहरूलाई बोलाएर भन्‍नुभयो, “तिमीहरू के चाहन्‍छौ? म तिमीहरूका निम्‍ति के गरिदिऊँ?”
येशूले टिठ्याएर तिनीहरूका आँखा छोइदिनुभयो र उत्तिखेरै तिनीहरूले दृष्‍टि पाए र तिनीहरू उहाँको पछि लागे।
जब उहाँहरू यरूशलेमको नजिक जैतून डाँड़ाको बेथफागेमा आइपुग्‍नुभयो, तब येशूले दुई जना चेलाहरूलाई यसो भनेर पठाउनुभयो,
तब चेलाहरू गए, र येशूले तिनीहरूलाई अह्राएबमोजिम गरे।
भीड़का मानिसहरूले जवाफ दिए, “यिनी गालीलको नासरतबाट आएका अगमवक्ता, येशू हुन्‌।”
येशू परमेश्‍वरको मन्‍दिरमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि उहाँले मन्‍दिरमा किनबेच गर्ने सबैलाई धपाउनुभयो, र पैसा साट्‌नेहरूका टेबिल, र परेवा बेच्‍नेहरूका आसन पल्‍टाइदिनुभयो।
र तिनीहरूले उहाँलाई भने, “सुन्‍दैछौ, यिनीहरूले के भनिरहेका छन्‌?” तब येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “हो, सुन्‍दैछु। के तिमीहरूले पढ़ेका छैनौ, ‘शिशुहरू र दूधे-बालकहरूका ओठबाट तपाईंले पूर्ण प्रशंसा निकाल्‍नुभएको छ’?”
येशूले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, तिमीहरूमा विश्‍वास छ र कहिल्‍यै शङ्का गरेनौ भने, अञ्‍जीरको बोटलाई जे गरियो त्‍यति मात्र होइन, तर यस डाँड़ालाई पनि ‘उखेलिएर समुद्रमा खस’ भन्‍यौ भने सो हुनेछ।
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “म पनि तिमीहरूलाई एउटा प्रश्‍न सोध्‍छु। मलाई त्‍यसको उत्तर दियौ भने, म कुन अधिकारले यी काम गर्दछु, सो तिमीहरूलाई बताउनेछु।
यसकारण तिनीहरूले येशूलाई जवाफ दिए, “हामीलाई थाहा छैन।” उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “म पनि कुन अधिकारले यी काम गर्दछु, सो तिमीहरूलाई भन्‍दिनँ।”
“अब यी दुईमा कुनचाहिँले बाबुको इच्‍छा पालन गर्‍यो?” तिनीहरूले जवाफ दिए, “पहिलोचाहिँले।” येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, कर उठाउनेहरू र वेश्‍याहरू तिमीहरूभन्‍दा अघि परमेश्‍वरको राज्‍यमा प्रवेश गर्छन्‌।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “के तिमीहरूले कहिल्‍यै धर्मशास्‍त्रमा पढ़ेनौ? ‘जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे त्‍यहीचाहिँ कुनाको शिर-ढुङ्गो बन्‍यो, यो परमप्रभुबाट भएको हो, अनि हाम्रो दृष्‍टिमा यो आश्‍चर्यमय छ।’
येशूले फेरि तिनीहरूलाई दृष्‍टान्‍तहरूमा भन्‍नुभयो,
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “तिमीहरू भ्रममा परेका छौ, किनकि तिमीहरू धर्मशास्‍त्र र परमेश्‍वरको शक्ति जान्‍दैनौ।
जब फरिसीहरू भेला भएका थिए, तब येशूले तिनीहरूलाई एउटा प्रश्‍न गर्नुभयो,
तब येशूले भीड़हरू र आफ्‍ना चेलाहरूलाई यसो भन्‍नुभयो:
त्‍यसपछि येशू मन्‍दिरबाट निस्‍केर जान लाग्‍नुहुँदा उहाँका चेलाहरू उहाँलाई मन्‍दिरका भवनहरू देखाउन भनी उहाँको नजिक आए।
येशू जैतून डाँड़ामा बस्‍नुहुँदा चेलाहरू एकान्‍तमा उहाँकहाँ आएर सोधे, “हामीलाई भन्‍नुहोस्, यी कुरा कहिले हुनेछन्, र तपाईंको आगमन र यस युगका अन्‍त्‍यको चिन्‍ह के हुनेछ?”
तब येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्‌।
येशूले यी सबै कुरा भनिसक्‍नुभएपछि आफ्‍ना चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो,
र तिनीहरूले येशूलाई कसरी छलसित पक्रने र मार्ने भनी मतो गरे।
येशू बेथानियामा सिमोन कुष्‍ठरोगीको घरमा हुनुहुँदा,
तर येशूले यो थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू यस नारीलाई किन दुःख दिन्‍छौ? तिनले त मेरो निम्‍ति एउटा असल काम गरेकी छिन्‌।
अब अखमिरी रोटीको चाड़को पहिलो दिन चेलाहरूले येशूकहाँ आएर भने, “तपाईंको निम्‍ति निस्‍तार-चाड़को भोज खाने प्रबन्‍ध हामी कहाँ गरौं?”
तब येशूको आदेशअनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्‍तार-चाड़को प्रबन्‍ध मिलाए।
तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्‍यो भाँच्‍नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्‍नुभयो, “लेओ, खाओ, यो मेरो शरीर हो।”
तब येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “आज राती मेरो कारणले तिमीहरू पछि हटिजानेछौ। किनभने यसो लेखिएको छ, ‘म गोठालालाई प्रहार गर्नेछु, र बगालका भेड़ाहरू जताततै छरपष्‍ट हुनेछन्‌।’
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै, म तिमीलाई भन्‍दछु, आजै राती भाले बास्‍न अघि तिमीले मलाई तीन पल्‍ट इन्‍कार गर्नेछौ।”
तब येशू गेतसमनी भन्‍ने ठाउँमा तिनीहरूसँग जानुभयो, र चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू यहीँ बस, मचाहिँ अलि पर गएर प्रार्थना गर्छु।”
तुरुन्‍तै येशूकहाँ गएर त्‍यसले भन्‍यो, “हे गुरु, प्रणाम!” र त्‍यसले उहाँलाई म्‍वाइँ खायो।
येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “मित्र, तिमी जे गर्न आएका छौ, त्‍यो गरिहाल।” तब तिनीहरूले अगि आएर येशूलाई समाती गिरफ्‍तारी गरे।
येशूको साथमा हुनेहरूमध्‍ये एउटाले हात बढ़ाएर आफ्‍नो तरवार झिक्‍यो, र मुख्‍य पूजाहारीको दासलाई प्रहार गर्‍यो, र त्‍यसको कान छिनाइदियो।
तब येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिम्रो तरवार म्‍यानमा हाल, किनभने तरवार लिने सबै तरवारैले नष्‍ट हुनेछन्‌।
त्‍यसै बेला येशूले भीड़लाई भन्‍नुभयो, “डाँकूको विरुद्धमा आएझैँ मलाई पक्रन तरवार र लाठाहरू लिएर तिमीहरू किन आयौ? म दिनहुँ मन्‍दिरमा शिक्षा दिँदै बस्‍थें, र तिमीहरूले मलाई पक्रेनौ।
येशूलाई पक्रनेहरूले उहाँलाई प्रधान पूजाहारी कैयाफाकहाँ लगे। त्‍यहाँ शास्‍त्रीहरू र धर्म-गुरुहरू भेला भएका थिए।
अब मुख्‍य पूजाहारी र जम्‍मै महासभाले येशूलाई मृत्‍युदण्‍ड दिनलाई उहाँको विरुद्धमा झूटो गवाही खोज्‍न लागे।
तर येशू चूप रहनुभयो। प्रधान पूजाहारीले उहाँलाई भने, “जीवित परमेश्‍वरको शपथ खाएर भन्‍दछु, हामीलाई बता, के तँ परमेश्‍वरको पुत्र ख्रीष्‍ट होस्‌?”
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तपाईंले नै भनिहाल्‍नुभयो। तापनि म तपाईंहरूलाई भन्‍दछु, अब उप्रान्‍त तपाईंहरूले मानिसको पुत्रलाई सर्वशक्तिमान्‌को दाहिने हातपट्टि बसेको, र आकाशको बादलमा आइरहेको देख्‍नुहुनेछ।”
पत्रुस बाहिर आँगनमा बसिरहेका थिए। एउटी नोकर्नीले तिनीकहाँ आएर भनी, “तिमी पनि गालील-निवासी येशूसँग थियौ?”
तिनी बाहिर दलानमा निस्‍केपछि अर्कीले तिनलाई देखी, र त्‍यहाँ भएकाहरूलाई भनी, “यो मानिस पनि येशू नासरीसँगै थियो।”
तब पत्रुसलाई येशूले भन्‍नुभएको यो कुरा याद भयो, “भाले बास्‍न अघि तिमीले मलाई तीन पल्‍ट इन्‍कार गर्नेछौ।” तब तिनी बाहिर गएर धुरुधुरु रोए।
बिहान सबेरै, सबै मुख्‍य पूजाहारीहरू र जनताका धर्म-गुरुहरूले येशूलाई मृत्‍युदण्‍ड दिन भनी उहाँको विरुद्धमा सरसल्‍लाह गरे।
येशू हाकिमको सामु उभिनुभयो, र तिनले येशूलाई सोधे, “के तिमी यहूदीहरूका राजा हौ?” येशूले भन्‍नुभयो, “तपाईं नै त्‍यसो भन्‍नुहुन्‍छ।”
जब मानिसहरू भेला भए, पिलातसले तिनीहरूलाई सोधे, “तिमीहरू के चाहन्‍छौ? म तिमीहरूका निम्‍ति कसलाई छोडिदिऊँ? बारब्‍बा कि ख्रीष्‍ट भनिने येशूलाई?”
किनभने तिनीहरूले येशूलाई डाहले नै सुम्‍पिदिएका हुन्‌ भनी तिनलाई थाहा थियो।
तर मुख्‍य पूजाहारीहरू र धर्म-गुरुहरूले बारब्‍बालाई छोडिदिने र येशूलाई मृत्‍युदण्‍ड दिने माग गर्न भनी मानिसहरूलाई सुर्‍याए।
पिलातसले तिनीहरूलाई भने, “तब ख्रीष्‍ट भनिने येशूलाई चाहिँ म के गरूँ त?” तिनीहरू सबैले जवाफ दिए, “त्‍यो क्रूसमा टाँगिओस्‌।”
तब तिनले तिनीहरूका निम्‍ति बारब्‍बालाई छोडिदिए, तर येशूलाई कोर्रा लगाएर क्रूसमा टाँगिनलाई सुम्‍पिदिए।
तब हाकिमका सिपाहीहरूले येशूलाई महलमा लगे, र जम्‍मै पल्‍टनलाई उहाँको सामुन्‍ने भेला गराए।
“येशू, यहूदीहरूको राजा “भन्‍ने उहाँको विरुद्धको दोष-पत्र तिनीहरूले उहाँको शिरदेखि मास्‍तिर टाँसिदिए।
तीन बजेतिर येशू यसो भनेर ठूलो सोरले कराउनुभयो, “इलोई, इलोई, लामा सबखथनी?” अर्थात्, “हे मेरा परमेश्‍वर, हे मेरा परमेश्‍वर, तपाईंले मलाई किन त्‍याग्‍नुभएको छ?”
तब येशू फेरि ठूलो सोरले कराउनुभयो र आफ्‍नो आत्‍मा त्‍याग्‍नुभयो।
र तिनीहरू चिहानहरूबाट निस्‍के, र मृतकबाट येशूको पुनरुत्‍थान भएपछि तिनीहरू पवित्र सहरमा प्रवेश गरे र धेरैकहाँ देखा परे।
जब कप्‍तान र तिनीसँग येशूलाई रुँग्‍नेहरूले भूकम्‍प र त्‍यहाँ भइरहेका घटना देखे, तब अति भयभीत भएर तिनीहरूले यसो भने, “साँच्‍चै, यिनी परमेश्‍वरका पुत्र रहेछन्‌।”
त्‍यहाँ गालीलबाट आएका धेरै स्‍त्रीहरू पनि थिए, तिनीहरूले टाढ़ाबाट यी सब हेरिरहेका थिए। तिनीहरू उहाँको सेवा-टहल गर्दै गालीलबाट येशूको पछिपछि आएका थिए।
साँझ परेपछि अरिमाथियाका योसेफ नाउँ भएका एक जना धनी मानिस आए। तिनी स्‍वयम्‌ येशूका चेला थिए।
तिनले पिलातसकहाँ गएर येशूको मृत शरीर मागे, र पिलातसले सो तिनलाई दिने हुकुम गरे।
तर स्‍वर्गदूतले ती स्‍त्रीहरूलाई भने, “तिमीहरू नडराओ, किनभने मलाई थाहा छ, तिमीहरू क्रूसमा टाँगिनुभएको येशूलाई खोज्‍दैछौ।
अकस्‍मात्‌ येशूले तिनीहरूलाई भेटेर भन्‍नुभयो, “शान्‍ति!” तिनीहरू नजिक आएर उहाँका पाउ पक्रेर उहाँलाई दण्‍डवत्‌ गरे।
तब येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “नडराओ, गएर मेरा भाइहरूलाई गालीलमा जानू भनिदेओ, र त्‍यहाँ तिनीहरूले मलाई देख्‍नेछन्‌।”
ती एघारै जना चेलाहरू गालीलको त्‍यस डाँड़ामा गए, जहाँ येशूले तिनीहरूलाई जाने आदेश दिनुभएको थियो।
तब येशू तिनीहरूकहाँ आएर भन्‍नुभयो, “स्‍वर्ग र पृथ्‍वीमा समस्‍त अधिकार मलाई दिइएको छ।
परमेश्‍वरका पुत्र येशू ख्रीष्‍टको सुसमाचारको आरम्‍भ।
अब ती दिनमा येशू गालीलको नासरतबाट आउनुभयो, र यूहन्‍नाबाट यर्दन नदीमा बप्‍तिस्‍मा लिनुभयो।
अब यूहन्‍ना पक्राउमा परेपछि परमेश्‍वरको सुसमाचार प्रचार गर्दै येशू गालीलमा आउनुभयो।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “मेरो पछि लाग, र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका जालहारी बनाउनेछु।”
त्‍यसले यसो भन्‍दै चिच्‍च्‍यायो, “हे नासरतका येशू, हामीलाई तपाईंसँग के सरोकार? के तपाईं हामीलाई सर्वनाश पार्नलाई आउनुभएको हो? म तपाईंलाई चिन्‍छु, तपाईं परमेश्‍वरका पवित्र जन हुनुहुन्‍छ।”
तर येशूले त्‍यसलाई यसो भन्‍दै हकार्नुभयो, “चूप लाग्‌, र त्‍यसबाट निस्‍किजा।”
अनि चाँड़ै नै येशूको कीर्ति गालीलको इलाका वरिपरि चारैतिर फैलियो।
तर त्‍यो निस्‍केर गयो, अनि यस विषयमा खुल्‍लमखुल्‍ला प्रचार गर्न लाग्‍यो, र येशू फेरि सहरमा खुलस्‍त प्रवेश गर्न सक्‍नुभएन, र एकान्‍त ठाउँहरूमा रहनुभयो। तर मानिसहरू चारैतिरबाट उहाँकहाँ आए।
भीड़को कारणले येशूको नजिक त्‍यस मानिसलाई पुर्‍याउन नसक्‍दा तिनीहरूले उहाँ हुनुभएको ठाउँको माथिको छाना खोले, र उघारिएको ठाउँबाट पक्षाघातीलाई त्‍यो सुतेको खाटसमेत तल ओह्रालिदिए।
येशूले तिनीहरूको विश्‍वास देखेर त्‍यस पक्षाघातीलाई भन्‍नुभयो, “ए छोरा, तिम्रा पापहरू क्षमा भए।”
अनि तिनीहरू आपसमा यसरी विचार गर्दैछन्‌ भन्‍ने येशूले तुरुन्‍तै आफ्‍नो आत्‍मामा थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “किन तिमीहरू आफ्‍ना मनमा यस्‍तो विचार गर्दैछौ?
उहाँ लेवीको घरमा भोजन गर्न बस्‍नुहुँदा कर उठाउने धेरै जना र पापीहरू पनि येशू र उहाँका चेलाहरूका साथमा बसिरहेका थिए। किनकि उहाँलाई पछ्याउनेहरू धेरै थिए।
यो सुनेर येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “निरोगीहरूलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीहरूलाई मात्र पर्छ। म धर्मीहरूलाई होइन, तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ।”
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “के दुलहा तिनीहरूका साथमा रहुञ्‍जेल जन्‍तीहरू उपवास बस्‍छन्‌ र? जहिलेसम्‍म दुलहा तिनीहरूका साथमा हुन्‍छन्‌ तिनीहरू उपवास बस्‍दैनन्‌।
त्‍यसपछि येशू आफ्‍ना चेलाहरूसँग समुद्रतिर जानुभयो, र गालीलबाट मानिसहरूको ठूलो भीड उहाँको पछि लाग्‍यो।
त्‍यसपछि येशू डाँड़ामा उक्‍लनुभयो, र उहाँले चाहनुभएका जतिलाई बोलाउनुभयो, र तिनीहरू उहाँकहाँ आए।
त्‍यसपछि येशू फेरि घरतिर जानुभयो। फेरि भीड जम्‍मा भयो, यहाँसम्‍म कि उहाँहरूले भोजन खान पनि पाउनुभएन।
जब येशूका परिवारले यो सुने, तब उहाँलाई लैजानलाई उनीहरू निस्‍के, किनकि उहाँको मन ठेगानमा छैन भनी उनीहरू भन्‍थे।
येशू डुङ्गाबाट बाहिर निस्‍कनेबित्तिकै चिहानबाट अशुद्ध आत्‍मा लागेको एक जना मानिसले उहाँलाई भेट्यो।
अनि जब त्‍यसले येशूलाई टाढ़ैबाट देख्‍यो तब दौड़ेर आयो, र उहाँलाई दण्‍डवत्‌ गर्‍यो।
अनि ठूलो सोरले चिच्‍च्‍याएर त्‍यसले भन्‍यो, “हे सर्वोच्‍च परमेश्‍वरका पुत्र येशू, तपाईंको मसँग के सरोकार? म परमेश्‍वरमा शपथ खाएर तपाईंलाई बिन्‍ती गर्दछु, कि मलाई दुःख नदिनुहोस्‌।”
तब तिनीहरू येशूकहाँ आए, र देखे कि त्‍यो भूत लागेको मानिस ठीक मनको भएर लुगा लगाई बसिरहेको थियो। यो देखेर तिनीहरू डराए।
अनि तिनीहरूको इलाकाबाट गइहाल्नुहोस्‌ भनी मानिसहरूले येशूलाई बिन्‍ती गर्न लागे।
अनि त्‍यो मानिस हिँड़िहाल्‍यो, र येशूले त्‍यसको निम्‍ति कति ठूलो काम गरिदिनुभएको थियो सो डेकापोलिसभरि प्रचार गर्न लाग्‍यो, र सबै मानिसहरूले अचम्‍म माने।
जब येशू फेरि डुङ्गामा समुद्रको पारिपट्टि जानुभयो, तब एउटा ठूलो भीड उहाँको वरिपरि भेला भयो। उहाँचाहिँ समुद्रको किनारमा हुनुहुन्‍थ्‍यो।
तब येशू तिनीसँग जानुभयो। एउटा ठूलो भीड उहाँको पछि लाग्‍यो, र मानिसहरू उहाँको वरिपरि ठेलमठेला गर्न लागे।
येशूको विषयमा त्‍यसले सुनेकी थिई, र भीड़को पछिल्‍तिरबाट आएर उहाँको वस्‍त्र त्‍यसले छोई।
आफूबाट शक्ति बाहिर निस्‍केको झट्टै येशूले थाहा पाएर भीड़मा पछिल्‍तिर फर्केर सोध्‍नुभयो, “कसले मेरो वस्‍त्र छोयो?”
तब आफूलाई जे भएको थियो सो थाहा पाएर त्‍यो स्‍त्री डरले काम्‍दै आएर येशूको अगि घोप्‍टो परी, र उहाँलाई सबै सत्‍य कुरा भनिदिई।
तब येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “अगमवक्तालाई आफ्‍नो देश र आफ्‍नो नातादारहरूका बीचमा र आफ्‍नै घरमा बाहेक अन्‍त कहीँ अनादर हुँदैन।”
हेरोद राजाले येशूको कीर्ति सुने, किनकि उहाँको नाउँ प्रचलित भएको थियो। कतिले भन्‍थे, “बप्‍तिस्‍मा-दिने यूहन्‍ना मरेकाबाट जीवित भएछन्, यसैले त तिनीद्वारा यस्‍ता शक्तिका काम भइरहेछन्‌।”
अनि प्रेरितहरू येशूकहाँ भेला भए, र तिनीहरूले जे-जे गरेका थिए र सिकाएका थिए, ती सबै उहाँलाई बयान गरे।
जब उहाँहरू डुङ्गाबाट निस्‍कनुभयो तब उत्तिखेरै मानिसहरूले येशूलाई चिनिहाले,
र छेउछाउका समस्‍त गाउँ हुँदो तिनीहरू दगुरिगए, र जहाँ येशू हुनुहुन्‍छ भनी सुने त्‍यहाँ बिरामीहरूलाई बिछ्याउनामा राखेर ल्‍याउन लागे।
यरूशलेमबाट आएका फरिसीहरू र शास्‍त्रीहरू येशूका चारैतिर भेला भए।
येशूका कतिपय चेलाहरूले अशुद्ध हात, अर्थात्‌ नधोएको हातले खाएका तिनीहरूले देखे।
त्‍यसलाई भीड़बाट अलग्‍गै एकान्‍तमा लगेर येशूले आफ्‍ना औँला त्‍यसका कानमा लगाउनुभयो। त्‍यसपछि थुकेर त्‍यसको जिब्रो छुनुभयो।
ती दिनमा फेरि एउटा ठूलो भीड जम्‍मा भयो, तर तिनीहरूसित खानेकुरो केही थिएन। तब येशूले चेलाहरूलाई आफूकहाँ बोलाएर भन्‍नुभयो,
येशूले चेलाहरूलाई यसो भनेर चेताउनी दिनुभयो, “तिमीहरू फरिसीहरूको खमिर र हेरोदको खमिरदेखि सतर्क रहो।”
तर तिनीहरूका साथमा रोटी नभएकोले येशूले यसो भन्‍नुभएको हो भनी तिनीहरूले आपसमा बहस गर्न लागे।
येशूले यो थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरूसित रोटी छैन भनी किन तिमीहरू बहस गर्दछौ? के तिमीहरू अझै पनि देख्‍दैनौ वा बुझ्‍दैनौ? के तिमीहरूको मन कठोर भएको छ?
येशू र उहाँका चेलाहरू कैसरिया फिलिप्‍पीका गाउँहरूमा जानुभयो। बाटोमा जाँदैगर्दा उहाँले आफ्‍ना चेलाहरूलाई यसो भनेर सोध्‍नुभयो, “मानिसहरूले के भन्‍छन्, म को हुँ?”
त्‍यसको छ दिनपछि येशूले पत्रुस, याकूब र यूहन्‍नालाई उहाँको साथ लिई एउटा उच्‍च पहाड़मा लैजानुभयो। त्‍यहाँ उहाँहरू मात्र हुनुहुन्‍थ्‍यो, अनि तिनीहरूका सामुन्‍ने उहाँको रूप बद्‌लियो।
त्‍यहाँ तिनीहरूकहाँ एलिया र मोशा देखा परे, र उनीहरू येशूसँग बातचीत गरिरहेका थिए।
पत्रुसले येशूलाई भने, “गुरुज्‍यू, हामी यहाँ भएको असल भयो। हामी यहाँ तीन वटा वासस्‍थान बनाऔं, एउटा तपाईंको निम्‍ति, एउटा मोशाको निम्‍ति र एउटा एलियाको निम्‍ति।”
अनि झट्टै वरिपरि हेर्दा तिनीहरूले आफ्‍ना साथमा येशूलाई बाहेक अरू कसैलाई देखेनन्‌।
उहाँहरू पहाड़बाट ओर्लंदैगर्नुहुँदा येशूले तिनीहरूलाई “मानिसको पुत्र मृतकबाट पुनरुत्‍थान नहोउञ्‍जेल तिनीहरूले जे देखेका थिए त्‍यो कसैलाई नभन्‍नू भनी आज्ञा दिनुभयो।
येशूले भन्‍नुभयो, “निश्‍चय नै, एलिया पहिले आउँछन्, र सबै कुराको पुनर्स्‍थापना गर्छन्‌। तर मानिसको पुत्रले धेरै कष्‍ट भोगेर अरूबाट तिरस्‍कृत हुनेछ भनी कसरी धर्मशास्‍त्रमा लेखिएको छ त?
तिनीहरूले त्‍यस केटालाई उहाँकहाँ ल्‍याए। येशूलाई देख्‍ने बित्तिकै त्‍यस आत्‍माले केटालाई लछारपछार पार्‍यो, र त्‍यो भूइँमा पछारिएर फीँज काढ्‌दै लड़ीबड़ी गर्न लाग्‍यो।
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “‘तपाईंले सक्‍नुहुन्‍छ!’ भनी के भनेको? विश्‍वास गर्नेको लागि त सबै कुरा सम्‍भव छ।”
तर येशूले त्‍यसको हात समातेर त्‍यसलाई जुरुक्‍क उठाउनुभयो, र त्‍यो उठ्यो।
तर येशूले भन्‍नुभयो, “त्‍यसलाई मनाही नगर, किनकि मेरो नाउँमा शक्तिको काम गर्नेले तुरुन्‍तै मेरो विरुद्धमा खराब बोल्‍नेछैन।
त्‍यस ठाउँलाई छोड़ेर यर्दन नदीको पारि यहूदियाको इलाकामा येशू जानुभयो र भीड उहाँकहाँ भेला भयो, अनि उहाँको रीतिअनुसार तिनीहरूलाई फेरि उहाँले शिक्षा दिनुभयो।
तर येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरूका हृदयको कठोरताले गर्दा उनले तिमीहरूलाई यो आज्ञा लेखिदिए।
घरमा हुँदा चेलाहरूले फेरि यस विषयमा येशूलाई सोधे।
मानिसहरूले साना बाल-बालिकाहरूलाई येशूले छोइदेऊन्‌ भन्‍ने उद्देश्‍यले उहाँकहाँ ल्‍याए, तर चेलाहरूले तिनीहरूलाई हकारे।
तर यो देखेर येशू रिसाउनुभयो, र तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “साना बाल-बालिकाहरूलाई मकहाँ आउन देओ, तिनीहरूलाई नरोक, किनभने परमेश्‍वरको राज्‍य यस्‍तैहरूको हो।
येशू बाटोमा जाँदैहुनुहुँदा, एक जना मानिस दौड़ेर आई उहाँको अगि घुँड़ा टेक्‍यो, र उहाँलाई सोध्‍यो, “हे असल गुरु, अनन्‍त जीवन प्राप्‍त गर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ?”
येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “तिमी किन मलाई असल भन्‍छौ? एकमात्र परमेश्‍वरबाहेक अरू कोही असल छैन।
येशूले त्‍यसलाई हेर्नुभयो, र त्‍यसलाई माया गरेर भन्‍नुभयो, “तिमीलाई अझ एउटा कुराको अभाव छ। जाऊ, र तिम्रा जे-जति छन्‌ बिक्री गर र गरीबहरूलाई देऊ, र तिमीलाई स्‍वर्गमा सम्‍पत्ति मिल्‍नेछ। अनि आएर मेरो पछि लाग।”
अनि वरिपरि हेरेर येशूले आफ्‍ना चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, धनीहरूलाई परमेश्‍वरको राज्‍यमा पस्‍नु कति कठिन छ।”
उहाँले भन्‍नुभएको यस कुरामा चेलाहरूले अचम्‍म माने। तर येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “बालक हो, धनसम्‍पत्तिमाथि भरोसा राख्‍नेहरूलाई परमेश्‍वरको राज्‍यभित्र पस्‍नु कति कठिन छ।
येशूले तिनीहरूलाई हेरेर भन्‍नुभयो, “मानिसहरूका निम्‍ति त यो असम्‍भव छ, तर परमेश्‍वरको लागि छैन, किनकि परमेश्‍वरको निम्‍ति सबै कुरा सम्‍भव हुन्‍छ।”
येशूले भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, जसले मेरो निम्‍ति र सुसमाचारको खातिर घर वा दाजुभाइ वा दिदी-बहिनी वा आमा-बुबा वा छोरा-छोरीहरू वा जग्‍गाजमिन छोड्‌छ,
उहाँहरू यरूशलेमतिर जाँदैहुनुहुन्‍थ्‍यो, र येशू तिनीहरूका अगिअगि हिँड़िरहनुभएको थियो। चेलाहरू अचम्‍मित थिए, र अरू पछिपछि आउनेहरू भयभीत थिए। तब उहाँले बाह्रै चेलाहरूलाई फेरि एकातिर लगेर आफूमाथि परिआउने कुराहरू तिनीहरूलाई सुनाउनुभयो।
तर येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू के माग्‍दछौ सो तिमीहरू जान्‍दैनौ। के जुन कचौरा म पिउँछु, त्‍यो तिमीहरू पिउन सक्‍छौ? अथवा जुन बप्‍तिस्‍मा मैले लिएको छु, त्‍यो बप्‍तिस्‍मा तिमीहरू लिन सक्‍छौ?”
तिनीहरूले उहाँलाई भने, “हामी सक्‍छौं।” येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “जुन कचौरा म पिउँछु त्‍यो तिमीहरू पिउनेछौ, र जुन बप्‍तिस्‍मा मैले लिएको छु त्‍यो बप्‍तिस्‍मा तिमीहरू लिनेछौ।
तब येशूले तिनीहरूलाई आफूकहाँ बोलाएर भन्‍नुभयो, “तिमीहरू जान्‍दछौ कि अन्‍यजातिहरूमाथि शासन गर्नेहरूले तिनीहरूमाथि अख्‍तियार चलाउँछन्‌। अनि तिनीहरूका ठूलाठालुहरूले तिनीहरूमाथि अधिकार चलाउँछन्‌।
जब त्‍यसले उहाँ नासरतका येशू हुनुहुन्‍छ भन्‍ने सुन्‍यो, तब कराएर त्‍यसले भन्‍न लाग्‍यो, “हे येशू, दाऊदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्‌।”
तब येशू टक्‍क अड़िनुभयो र भन्‍नुभयो, “त्‍यसलाई बोलाओ।” अनि तिनीहरूले त्‍यस अन्‍धालाई यसो भनेर बोलाए, “ढाड़स गर्, उठ्, उहाँले तँलाई बोलाउँदैहुनुहुन्‍छ।”
अनि आफ्‍नो खास्‍टो फालेर त्‍यो जुरुक्‍क उठ्यो र येशूकहाँ आयो।
येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “तिमी के चाहन्‍छौ, म तिम्रो निम्‍ति के गरूँ?” त्‍यस अन्‍धो मानिसले उहाँलाई भन्‍यो, “रब्‍बी, म दृष्‍टि पाऊँ।”
अनि येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “तिम्रो बाटो लाग। तिम्रो विश्‍वासले तिमीलाई निको पारेको छ।” तब तुरुन्‍तै त्‍यसले दृष्‍टि पायो, र बाटोमा येशूको पछिपछि लाग्‍यो।
येशूले तिनीहरूलाई अह्राउनुभएजस्‍तै तिनीहरूले भने, र उनीहरूले तिनीहरूलाई जान दिए।
तिनीहरूले बछेड़ो येशूकहाँ ल्‍याए, र आफ्‍ना वस्‍त्रहरू त्‍यसमाथि राखिदिए, र उहाँ त्‍यसमाथि सवार हुनुभयो।
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्‍नुभयो, “परमेश्‍वरमा विश्‍वास राख।
उहाँहरू फेरि यरूशलेममा आउनुभयो। अनि येशू मन्‍दिरमा यताउता हिँड़िरहनुहुँदा मुख्‍य पूजाहारीहरू, शास्‍त्रीहरू, धर्म-गुरुहरू उहाँकहाँ आए।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “म तिमीहरूलाई एउटा प्रश्‍न सोध्‍छु, र तिमीहरूले त्‍यसको जवाफ देओ, र कुन अधिकारले म यी काम गर्दछु, सो तिमीहरूलाई भन्‍नेछु।
तब तिनीहरूले येशूलाई जवाफ दिएर भने, “हामीलाई थाहा छैन।” येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “म पनि कुन अधिकारद्वारा यी काम गर्दछु, सो तिमीहरूलाई भन्‍दिनँ।”
हामी कर तिरौं कि नतिरौं?” येशूले तिनीहरूको कपटीपन थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू किन मलाई परीक्षा गर्दछौ? एउटा दिनार ल्‍याएर देखाओ।”
तब येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “कैसरका चीजहरू कैसरलाई देओ, र परमेश्‍वरका चीजहरू परमेश्‍वरलाई।” तिनीहरूले उहाँसँग अचम्‍म माने।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू भूलमा परेको कारण यही होइन र, कि तिमीहरू न त धर्मशास्‍त्र जान्‍दछौ, न परमेश्‍वरको शक्तिलाई जान्‍दछौ?
शास्‍त्रीहरूमध्‍ये एक जना आए, र तिनीहरूलाई आपसमा विवाद गरिरहेका सुने। येशूले मानिसहरूलाई ठीक जवाफ दिनुभएको देखेर तिनले उहाँलाई सोधे, “सबै आज्ञाहरूमा मुख्‍यचाहिँ कुन हो?”
येशूले जवाफ दिनुभयो, “सबैभन्‍दा मुख्‍यचाहिँ यो हो: ‘हे इस्राएल सुन्, परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्‍छ।
तिनले बुद्धिमानीसाथ जवाफ दिएका देखेर येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिमी परमेश्‍वरको राज्‍यदेखि टाढ़ा छैनौ।” त्‍यस समयदेखि उहाँलाई प्रश्‍न गर्ने कसैको साहस भएन।
अनि मन्‍दिरमा सिकाउनुहुँदा येशूले भन्‍नुभयो, “कसरी ख्रीष्‍ट दाऊदका पुत्र हुन्‌ भनी व्‍यवस्‍थाका शास्‍त्रीहरू भन्‍दछन्‌?
तब शिक्षा दिनुहुँदा येशूले भन्‍नुभयो, “शास्‍त्रीहरूदेखि होशियार रहो। तिनीहरू लामो वस्‍त्र लाएर यताउता डुल्‍न र बजारहरूमा अभिवादन पाउन,
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “यहाँ त एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा नछोडिने गरी सबै भत्‍काइनेछन्‌।”
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्‌।
तर येशूले भन्‍नुभयो, “छोडिदेओ, किन तिमीहरू यिनलाई सताउँछौ? यिनले मप्रति असल काम गरेकी छे।
तब बाह्र चेलाहरूमध्‍ये एक जना यहूदा इस्‍करियोतचाहिँ येशूलाई तिनीहरूका हातमा पक्राइदिनका निम्‍ति मुख्‍य पूजाहारीहरूकहाँ गयो।
उहाँहरू ढल्‍केर खानुहुँदैगर्दा येशूले भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, तिमीहरूमध्‍ये मसँग खाने एक जनाले मलाई धोका दिनेछ।”
अनि खाइरहनुहुँदा येशूले रोटी लिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो र भाँच्‍नुभयो र तिनीहरूलाई दिँदै भन्‍नुभयो, “लेओ, यो मेरो शरीर हो।”
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू सबै पछि हटिजानेछौ, किनकि यस्‍तो लेखिएको छ, ‘म गोठालालाई प्रहार गर्नेछु, र भेड़ाहरू तितरबितर हुनेछन्‌।’
तब येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, आजकै राती भाले दुई पल्‍ट बास्‍न अघि तिमीले मलाई तीन पल्‍ट इन्‍कार गर्नेछौ।”
येशू बोल्‍दैहुनुहुँदा बाह्रै चेलाहरूमध्‍येको एक जना यहूदा अचानक त्‍यहाँ देखा पर्‍यो। मुख्‍य पूजाहारीहरू, शास्‍त्रीहरू र धर्म-गुरुहरूले पठाएको एक दल तरवार र लाठो लिएर त्‍यससँग त्‍यहाँ आयो।
अनि सोझै येशूकहाँ गएर यहूदाले भन्‍यो, “हे रब्‍बी,” र उहाँलाई म्‍वाइँ खायो।
तब तिनीहरूले येशूलाई समाते र गिरफ्‍तार गरे।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “के तिमीहरू एउटा डाँकूलाई जस्‍तै तरवार र लाठोसमेत लिएर मलाई पक्रन आएका छौ?
तब तिनीहरूले येशूलाई प्रधान पूजाहारीकहाँ लगे, र त्‍यहाँ सबै मुख्‍य पूजाहारीहरू, धर्म-गुरुहरू र शास्‍त्रीहरू जम्‍मा भएका थिए।
अब मुख्‍य पूजाहारी र जम्‍मै महासभाले येशूलाई मार्नको निम्‍ति उहाँको विरुद्धमा गवाही खोजे, तर केही पाएनन्‌।
तब प्रधान पूजाहारीले बीचमा खड़ा भएर येशूलाई सोधे, “के तँसँग केही जवाफ छैन? यी मानिसहरूले तेरो विरुद्धमा गवाही दिएको के हो?”
तर येशू चूप लाग्‍नुभयो, र केही जवाफ दिनुभएन। फेरि प्रधान पूजाहारीले उहाँलाई सोधे, “के तँ परमधन्‍यको पुत्र ख्रीष्‍ट होस्‌?”
येशूले भन्‍नुभयो, “म हुँ, अनि तपाईंहरूले मानिसको पुत्रलाई सर्वशक्तिमान्‌को दाहिने बाहुलीतर्फ बसिरहेको र आकाशका बादलहरूका साथमा आइरहेको देख्‍नुहुनेछ।”
र पत्रुसलाई आगो तापिरहेका देखेर तिनलाई नियालेर हेरी भनी, “तिमी पनि येशू नासरीसँग थियौ।”
अनि तुरुन्‍तै दोस्रो पल्‍ट भाले बास्‍यो, र पत्रुसलाई येशूले यसो भन्‍नुभएको कुरा सम्‍झना भयो, “भाले दुई पल्‍ट बास्‍न अघि तिमीले मलाई तीन पल्‍ट इन्‍कार गर्नेछौ।” अनि त्‍यस कुरालाई सम्‍झेर तिनी धुरुधुरु रोए।
बिहान हुने बित्तिकै मुख्‍य पूजाहारीहरू, धर्म-गुरुहरू, शास्‍त्रीहरू र जम्‍मै महासभाले आपसमा सल्‍लाह गरी येशूलाई बाँधेर लगे, र पिलातसकहाँ सुम्‍पिदिए।
तर येशूले फेरि केही जवाफ दिनुभएन, यहाँसम्‍म कि पिलातस छक्‍क परे।
किनकि ईर्ष्‍याले गर्दा नै मुख्‍य पूजाहारीहरूले येशूलाई उनीकहाँ सुम्‍पेका हुन्‌ भनी उनलाई थाहा थियो।
तब पिलातसले भीड़लाई सन्‍तुष्‍ट पार्ने इच्‍छाले तिनीहरूका निम्‍ति बारब्‍बालाई छोडिदिए, र येशूलाई कोर्रा लाएर क्रूसमा टाँग्‍न सुम्‍पिदिए।
अनि येशूको गिल्‍ला गरिसकेपछि तिनीहरूले बैजनी वस्‍त्र फुकालिदिए, र उहाँका आफ्‍नै लुगा लगाइदिए। त्‍यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई क्रूसमा टाँग्‍नलाई बाहिर लगे।
अनि अलेक्‍जेन्‍डर र रूफसका बुबा, कुरेनी बासिन्‍दा सिमोनलाई गाउँबाट आइरहेका तिनीहरूले भेटे, र येशूको क्रूस बोकेर लैजान तिनलाई कर लगाए।
त्‍यसपछि तिनीहरूले येशूलाई गलगथा भन्‍ने ठाउँमा ल्‍याए— गलगथाको अर्थ खोपड़ीको स्‍थान हो।
तीन बजेतिर यसो भनेर येशू ठूलो सोरले कराउनुभयो, “इलोई, इलोई, लामा सबखथनी?” — जसको अर्थ हो, “हे मेरा परमेश्‍वर, हे मेरा परमेश्‍वर, तपाईंले मलाई किन त्‍याग्‍नुभएको छ?”
तब येशूले ठूलो सोर निकालेर प्राण त्‍याग्‍नुभयो।
येशूले यसरी प्राण त्‍याग्‍नुभएको देखेर उहाँको सामने उभिएका कप्‍तानले भने, “साँच्‍चै नै यी मानिस परमेश्‍वरका पुत्र रहेछन्‌।”
उहाँ गालीलमा हुनुहुँदा, यिनीहरूले उहाँलाई पछ्याउँथे, र उहाँको सेवा-टहल गर्थे। येशूको साथमा यरूशलेममा आएका अरू धेरै स्‍त्रीहरू पनि त्‍यहाँ थिए।
महासभाका प्रतिष्‍ठित सदस्‍य अरिमाथियाका योसेफ, जसले परमेश्‍वरका राज्‍यको बाटो हेर्दैथिए, तिनले साहसपूर्वक पिलातसकहाँ गएर येशूको लाश मागे।
येशू अघि नै मरिसक्‍नुभएको सुन्‍दा पिलातस छक्‍क परे। अनि कप्‍तानलाई आफूकहाँ बोलाएर उहाँको मृत्‍यु भएको हो कि होइन भनी सोधपूछ गरे।
उहाँको मृत्‍यु भइसकेको कुरा कप्‍तानबाट थाहा पाएपछि पिलातसले येशूको मृत शरीर योसेफलाई लैजाने अनुमति दिए।
शबाथ-दिन बितेपछि मरियम मग्‍दलिनी र याकूबकी आमा मरियम र सलोमीले सुगन्‍धित द्रव्‍य येशूको शरीरमा घस्‍नलाई किने।
तर उनले तिनीहरूलाई भने, “आश्‍चर्य नमान, तिमीहरू नासरतका येशूलाई खोज्‍दछौ, जो क्रूसमा टाँगिनुभएको थियो। उहाँ जीवित भई उठ्‌नुभएको छ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्‍न। उहाँलाई राखेको ठाउँ हेर।
[हप्‍ताको पहिलो दिनको बिहानै उहाँ जीवित भई उठ्‌नुभएपछि उहाँ पहिले मरियम मग्‍दलिनीकहाँ देखा पर्नुभयो। तिनीबाट येशूले सात वटा भूतहरू निकाल्‍नुभएको थियो।
तर जब येशू जीवित हुनुभयो र मरियमकहाँ देखा पर्नुभयो भन्‍ने कुरा तिनीहरूले सुने, तब तिनीहरूले पत्‍याएनन्‌।
तब यसरी तिनीहरूसँग बोलिसक्‍नुभएपछि प्रभु येशू स्‍वर्गारोहण हुनुभयो, र परमेश्‍वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो।
अब हेर, तिमीले गर्भधारण गर्नेछ्यौ, र एउटा छोरो जन्‍माउनेछ्यौ, र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्‍नेछ्यौ।
आठौँ दिनमा बालकको खतना हुँदा उहाँको नाउँ येशू राखियो, जुन नाउँ उहाँ गर्भमा आउन अघि स्‍वर्गदूतले दिएका थिए।
उनी पवित्र आत्‍माको प्रेरणामा मन्‍दिरभित्र आए। जब आमा-बुबाले बालक येशूलाई उहाँको निम्‍ति व्‍यवस्‍थाअनुसारको विधि गर्नलाई मन्‍दिरभित्र ल्‍याए,
जब येशू बाह्र वर्षका हुनुभयो, तब उहाँहरू चाड़को रीतिअनुसार यरूशलेममा जानुभयो।
चाड़का दिन सिद्धिएपछि तिनीहरू फर्कंदा बालक येशू यरूशलेममै रहनुभयो। योचाहिँ उहाँका आमा-बुबाले थाहा पाएनन्‌।
अनि येशू बुद्धिमा, कदमा र परमेश्‍वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्‌दैजानुभयो।
जब सबै मानिसहरूले बप्‍तिस्‍मा लिए, अनि येशूले पनि बप्‍तिस्‍मा लिएर प्रार्थना गरिरहनुभएको थियो, तब स्‍वर्ग उघ्रियो,
येशूले आफ्‍नो सेवाकार्य आरम्‍भ गर्नुहुँदा उहाँ करीब तीस वर्षका हुनुहुन्‍थ्‍यो। मानिसहरू उहाँ योसेफका छोरा हुन्‌ भन्‍ठान्‍थे। योसेफ एलीका छोरा थिए,
येशू पवित्र आत्‍माले परिपूर्ण भएर यर्दनबाट फर्कनुभयो, र आत्‍माले उहाँलाई उजाड-स्‍थानमा लैजानुभयो
येशूले त्‍यसलाई जवाफ दिनुभयो, “लेखिएको छ, ‘मानिस रोटीले मात्र जीवित रहँदैन’।”
येशूले त्‍यसलाई जवाफ दिनुभयो, “लेखिएको छ, ‘तैंले परमप्रभु, आफ्‍ना परमेश्‍वरलाई दण्‍डवत्‌ गर्नू, र उहाँको मात्र सेवा गर्नू’।”
येशूले त्‍यसलाई जवाफ दिनुभयो, “यसो भनिएको छ, ‘तैंले परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वरको परीक्षा नगर्नू’।”
येशू पवित्र आत्‍माको शक्तिमा गालीलमा फर्कनुभयो, र उहाँका विषयको कुरा वरिपरिका सबै ठाउँमा फिँजियो।
“हे येशू नासरी, तपाईंको हामीहरूसँग के काम? के तपाईं हामीहरूलाई नष्‍ट गर्न आउनुभएको हो? मलाई थाहा छ, तपाईं परमेश्‍वरका पवित्र जन हुनुहुन्‍छ।”
अनि येशूले त्‍यसलाई हकारेर भन्‍नुभयो, “चूप लाग्, र त्‍यसबाट निस्‍किजा।” त्‍यस मानिसलाई बीचमा पछारेर त्‍यसलाई केही हानि नगरिकन त्‍यो भूतात्‍मा त्‍यसबाट निस्‍केर गयो।
तब यो देखेर येशूको पाउमा घोप्‍टो परी सिमोन पत्रुसले भने, “हे प्रभु, मबाट जाइजानुहोस्, किनभने म पापी मानिस हुँ।”
त्‍यसै गरी जब्‍दियाका छोराहरू याकूब र यूहन्‍ना पनि छक्‍क परे। तिनीहरू सिमोनसँग साझेदार थिए। येशूले सिमोनलाई भन्‍नुभयो, “नडराऊ, अब उप्रान्‍त तिमीले मानिसहरूलाई पक्रनेछौ।”
जब उहाँ कुनै एउटा सहरमा हुनुहुन्‍थ्‍यो, तब कुष्‍ठरोगले भरिएको एक जना मानिसले येशूलाई देखेर उहाँका चरणमा घोप्‍टो परी बिन्‍ती गर्‍यो, “हे प्रभु, तपाईंले इच्‍छा गर्नुभयो भने मलाई निको पार्न सक्‍नुहुन्‍छ।”
तर येशूचाहिँ निर्जन स्‍थानहरूमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्‍थ्‍यो।
तर भीड़ले गर्दा त्‍यसलाई भित्र लैजाने केही बाटो नपाएर तिनीहरू छतमाथि चढ़े, र तिनीहरूले झिँगटी हटाएर त्‍यसलाई खाटैसमेत येशूको सामुन्‍ने ओरालिदिए।
तर येशूले तिनीहरूको प्रश्‍न थाहा पाएर तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्‍नुभयो, “तिमीहरू आफ्‍ना हृदयमा किन प्रश्‍न गर्दछौ?
तर येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “निरोगीलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीलाई मात्र।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “के दुलहा साथमा छउञ्‍जेल जन्‍तीहरूलाई उपवास बस्‍न लाउन सक्‍छौ?
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्‍नुभयो, “के तिमीहरूले यो पनि पढ़ेका छैनौ, दाऊदले जब तिनी आफै र तिनको साथमा हुनेहरू भोकाएका थिए, तब के गरे?
तब येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “म तिमीहरूलाई सोध्‍छु, शबाथमा असल गर्नु वा खराब गर्नु, प्राण बचाउनु वा नाश गर्नु, कुनचाहिँ उचित हो?”
तर तिनीहरू रीसले चूर भए, र येशूलाई के गरौं भनी आपसमा मतो गर्न लागे।
जब येशूको बारेमा तिनले सुने, तब तिनको कमारालाई निको पारिदिनोस्‌ भनी तिनले यहूदीहरूका धर्म-गुरुहरूलाई बिन्‍ती गर्न पठाए।
तिनीहरू येशूकहाँ आएर यसो भनेर उहाँलाई आग्रहपूर्वक बिन्‍ती गरे, “तिनी तपाईंको यो कृपा पाउने योग्‍यका छन्,
येशू तिनीहरूसाथ जानुभयो। कप्‍तानको घरको नजिकै उहाँ हुनुहुँदा, कप्‍तानले तिनका मित्रहरूलाई उहाँकहाँ यसो भनी पठाए, “हे प्रभु, दुःख नउठाउनुहोस्, किनकि तपाईं मेरो घरभित्र प्रवेश गर्नुहुने योग्‍यको म छैनँ,
यो कुरा सुनेर येशू तिनीसँग आश्‍चर्यचकित हुनुभयो, र फर्केर आफूपछि आउने भीड़लाई भन्‍नुभयो, “म तिमीहरूलाई भन्‍छु, मैले इस्राएलमा पनि यस्‍तो ठूलो विश्‍वास देखेको छैनँ।”
भोलिपल्‍ट येशू नाइन नाउँको सहरमा जानुभयो, र उहाँका चेलाहरू र एउटा ठूलो भीड उहाँका साथमा गए।
तब मृत मानिस उठेर बस्‍यो, र बोल्‍न लाग्‍यो। येशूले त्‍यसलाई आमाको जिम्‍मा लगाउनुभयो।
जब ती मानिसहरू येशूकहाँ आए, तब तिनीहरूले भने, “बप्‍तिस्‍मा-दिने यूहन्‍नाले हामीलाई यो सोध्‍न तपाईंकहाँ पठाएका छन्, ‘जो आउनुहुनेछ, के तपाईं उहाँ नै हुनुहुन्‍छ? कि हामी अरू कसैको प्रतीक्षा गरौं?”
त्‍यसै बेला येशूले धेरैलाई रोग, व्‍यथा र दुष्‍टात्‍माहरूबाट छुटाउनुभयो, र धेरै अन्‍धाहरूलाई दृष्‍टि प्रदान गर्नुभयो।
येशूले भन्‍नुभयो, “यस पुस्‍ताका मानिसहरूलाई म केसित तुलना गरूँ? तिनीहरू केजस्‍ता छन्‌?
त्‍यस सहरमा एउटी पापी स्‍त्री थिई। फरिसीको घरमा येशू खान बस्‍नुभएको छ भन्‍ने सुनेर, र एउटा सिङ्गमरमरको शीशीमा अत्तर लिएर त्‍यो त्‍यहाँ आई,
येशूले त्‍यस फरिसीलाई भन्‍नुभयो, “ए सिमोन, तिमीलाई केही भन्‍नु छ।” तिनले भने, “गुरुज्‍यू, भन्‍नुहोस्‌।”
त्‍यसले येशूलाई देख्‍यो, र चिच्‍च्‍याएर उहाँको सामु घोप्‍टो परी उच्‍च सोरले भन्‍यो, “हे सर्वोच्‍च परमेश्‍वरका पुत्र येशू, तपाईंको मसँग के काम? बिन्‍ती गर्दछु, मलाई नसताउनुहोस्‌।”
येशूले त्‍यसलाई सोध्‍नुभयो, “तेरो नाउँ के हो?” त्‍यसले भन्‍यो, “फौज।” किनभने धेरै भूतहरू त्‍यसमा पसेका थिए।
अनि जे भएको थियो त्‍यो हेर्नलाई मानिसहरू येशूकहाँ आए, र जुन मानिसबाट भूतहरू निस्‍केका थिए, त्‍यसलाई लुगा लाएर सद्दे मनको भई येशूका चरणमा बसिरहेको भेट्टाए, र तिनीहरू भयभीत भए।
गेरासेनसको आसपासका सबै गाउँका मानिसहरूले येशूलाई तिनीहरूका गाउँबाट गइहाल्‍नुहोस्‌ भनी बिन्‍ती गरे, किनभने तिनीहरू ज्‍यादै भयभीत भएका थिए। यसकारण उहाँ डुङ्गामा चढ़ेर फर्कनुभयो।
तर जुन मानिसबाट भूतहरू निस्‍केका थिए, त्‍यसले ‘उहाँको साथमा जान पाऊँ’ भनी उहाँलाई बिन्‍ती गर्न लाग्‍यो। तर येशूले त्‍यसलाई यसो भनेर बिदा दिनुभयो,
“तिमी आफ्‍नो घर फर्क, र परमेश्‍वरले तिम्रो निम्‍ति कति ठूलो काम गर्नुभयो, सो घोषणा गर।” तब त्‍यो गयो, र येशूले त्‍यसको निम्‍ति कति ठूलो काम गर्नुभएको थियो, सो सारा सहरभरि प्रचार गर्न लाग्‍यो।
येशू फर्केर आउनुहुँदा भीड़ले उहाँलाई स्‍वागत गर्‍यो, किनकि तिनीहरू सबैले उहाँको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए।
याइरस नाउँका एक जना सभाघरका शासक आएर येशूका पाउमा परे, र तिनको घरमा आउनुहोस्‌ भनी उहाँलाई बिन्‍ती गरे,
किनकि बाह्र वर्ष पुगेकी तिनकी एकमात्र छोरी थिई, जो मर्नै लागेकी थिई। येशू जाँदैगर्नुहुँदा मानिसहरूले उहाँलाई घचेटिरहेका थिए।
येशूले भन्‍नुभयो, “मलाई कसले छोयो?” जब सबैले इन्‍कार गरे, तब पत्रुस र तिनीहरूसँग हुनेहरूले भने, “गुरुज्‍यू, भीड़ले तपाईंलाई घेरेर ठेल्‍दैछन्‌।”
तर येशूले भन्‍नुभयो, “कसैले मलाई छोएकै हो, किनभने शक्ति मबाट निस्‍केर गएको मैले थाहा पाएँ।”
तर येशूले यो सुनेर याइरसलाई भन्‍नुभयो, “नडराऊ, विश्‍वास मात्र गर, र त्‍यो निको हुनेछे।”
एक पल्‍ट येशू एकलै प्रार्थना गरिरहनुभएको थियो, चेलाहरू उहाँसँग थिए, र उहाँले तिनीहरूलाई सोध्‍नुभयो, “मानिसहरूले मलाई को हो भन्‍छन्‌?”
उनीहरू महिमित रूपमा देखा परी येशूका मृत्‍युको विषयमा बातचीत गरिरहेका थिए। यो कुरा उहाँले यरूशलेममा पूरा गर्नुपर्नेथियो।
तब ती दुई मानिसहरू उहाँसँग बिदा भएर जान लाग्‍दा पत्रुसले येशूलाई भने, “गुरुज्‍यू, हामीलाई यहीँ बस्‍नु असल रहेछ। हामी तीन वटा वासस्‍थान बनाऔं— एउटा तपाईंको निम्‍ति, एउटा मोशाको निम्‍ति र एउटा एलियाको निम्‍ति।” आफूले बोलेका कुराको तिनलाई ख्‍यालै थिएन।
यो शब्‍द भएपछि येशू त्‍यहाँ एकलै हुनुभयो। तिनीहरू चूपचाप रहे, र तिनीहरूले देखेका कुराहरू ती दिनमा कसैलाई भनेनन्‌।
भोलिपल्‍ट जब येशू र ती चेलाहरू पहाड़बाट ओर्लनुभयो, एउटा ठूलो भीड उहाँलाई भेट्‌न आयो।
तब येशूले जवाफ दिनुभयो, “ए अविश्‍वासी र हठी पुस्‍ता, म कहिलेसम्‍म तिमीहरूसँग रहुँला, र तिमीहरूलाई कतिसम्‍म सहुँ? तिम्रो छोरालाई यहाँ ल्‍याऊ।”
तर त्‍यो आउँदाआउँदै भूतात्‍माले त्‍यसलाई पछारिहाल्‍यो, र ऐँठ्‌न लाग्‍यो। तर येशूले त्‍यस अशुद्ध आत्‍मालाई हकार्नुभयो, र त्‍यस बालकलाई निको पारेर त्‍यसका बाबुलाई सुम्‍पिदिनुभयो।
परमेश्‍वरको महानता देखेर तिनीहरू सबै छक्‍क परे। येशूले गर्नुभएको प्रत्‍येक काममा सबै जना छक्‍क परेका देखेर, उहाँले आफ्‍ना चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो,
तर येशूले तिनीहरूका मनको विचार थाहा पाएर एउटा बालकलाई लिई आफ्‍नो छेउमा राख्‍नुभयो,
तर येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिनलाई मनाही नगर। किनभने जो तिम्रो विरुद्धमा छैन, त्‍यो तिम्रो पक्षमा हुन्‍छ।”
तब येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “स्‍यालका दुला छन्, र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुँड़, तर मानिसको पुत्रको त शिर राख्‍ने ठाउँ पनि छैन।”
तर येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “आफ्‍नो हात हलोमा लगाएर पछिल्‍तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्‍वरका राज्‍यको योग्‍यको हुँदैन।”
त्‍यही बेला येशू पवित्र आत्‍मामा उल्‍लसित हुनुभयो, र भन्‍नुभयो, “हे पिता, स्‍वर्ग र पृथ्‍वीका परमप्रभु, म तपाईंमा धन्‍यवाद चढ़ाउँछु, किनकि तपाईंले यी कुरा बुद्धिमान्‌ र समझदारबाट गुप्‍त राखेर बालकहरूलाई प्रकट गर्नुभयो। किनकि, पिता, तपाईंलाई यही असल लाग्‍यो।
तर तिनले आफूलाई धार्मिक देखाउने इच्‍छा गरेर येशूलाई भने, “मेरो छिमेकीचाहिँ को हो त?”
येशूले जवाफ दिनुभयो, “एक जना मानिस यरूशलेमबाट यरीहोतिर जाँदैथियो। त्‍यो डाँकूहरूको फेला पर्‍यो। तिनीहरूले त्‍यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे, र अधमरो पारी छोड़ेर गए।
येशूले सोध्‍नुभयो, “तिम्रो विचारमा यी तीन जनामध्‍ये डाँकूहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुनचाहिँ ठहरियो?”
तिनले भने, “त्‍यस मानिसमाथि दया देखाउनेचाहिँ।” तब येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “जाऊ, तिमी पनि त्‍यसै गर।”
मरियम नाउँ भएकी तिनकी एउटी बहिनी थिइन्‌। तिनी येशूका पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुन्‍दथिन्‌।
तर मार्था सेवा-सत्‍कारको धेरै काममा अल्‍झेकी थिइन्‌। तिनले येशूकहाँ आएर भनिन्, “प्रभुज्‍यू, मेरी बहिनीले सेवा-सत्‍कारको काममा मलाई एकलै पारेकी छिन्, तपाईं वास्‍ता राख्‍नुहुन्‍न? त्‍यसलाई भनिदिनोस्, र त्‍यसले मलाई सघाओस्‌।”
तर येशूले जवाफ दिएर तिनलाई भन्‍नुभयो, “मार्था, मार्था, तिमी धेरै कुराका विषयमा चिन्‍ता गर्छ्यौ, र व्‍याकुल हुन्‍छ्यौ।
येशू बोलिसक्‍नुभएपछि एक जना फरिसीले उहाँलाई भोजनमा निम्‍तो गरे। उहाँ घरभित्र पसेर खान बस्‍नुभयो।
तब येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “तिनीहरूले यसरी कष्‍ट भोगे भन्‍दैमा, के तिमीहरू ठान्‍छौ, यी गालीलीहरू अरू सबै गालीलीहरूभन्‍दा बढ़ी पापी थिए?
येशूले त्‍यसलाई देख्‍नुभयो, र बोलाएर भन्‍नुभयो “ए नारी, तिमी आफ्‍नो दुर्बलताबाट मुक्त भयौ।”
सभाघरका शासक क्रोधित भए, किनकि येशूले शबाथमा निको पार्नुभएको थियो, र तिनले मानिसहरूलाई भने, “काम गर्ने छ दिन छन्‌। यसकारण यी छ दिनभित्र आएर निको होओ, शबाथ-दिनमा होइन।”
येशूले व्‍यवस्‍थाका पण्‍डितहरू र फरिसीहरूलाई सोध्‍नुभयो, “शबाथमा निको पार्नु उचित छ, कि छैन?”
येशूले आफ्‍ना चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, “कुनै धनी मानिसको एक जना व्‍यवस्‍थापक थियो। त्‍यसले आफ्‍नो मालिकको धन-सम्‍पत्ति उड़ाइरहेको छ भन्‍ने अभियोग त्‍यसको विरुद्धमा लागेको थियो।
येशूले आफ्‍ना चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, “पाप गर्न लाउने परीक्षाहरू निश्‍चय आउँछन्‌। तर धिक्‍कार त्‍यस मानिसलाई, जसद्वारा ती आउँछन्‌!
येशू यरूशलेमतिर जाँदैहुनुहुन्‍थ्‍यो। यस यात्रामा उहाँ सामरिया र गालीलको सिमाना भएर जानुभयो।
चर्को सोरले भने, “हे येशू गुरुज्‍यू, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्‌।”
र येशूलाई धन्‍यवाद दिएर त्‍यो येशूका पाउमा घोप्‍टो पर्‍यो। त्‍यो एक सामरी थियो।
येशूले भन्‍नुभयो, “के निको भएका दश जना होइनन्‌ र? अरू नौ जना कहाँ छन्‌?
येशूले छोइदेऊन्‌ भनी मानिसहरूले शिशुहरूलाई उहाँकहाँ ल्‍याए। तर चेलाहरूले यो देखेर तिनीहरूलाई हप्‍काए।
येशूले तिनीहरूलाई आफूकहाँ बोलाएर भन्‍नुभयो, “बालकहरूलाई मकहाँ आउन देओ, तिनीहरूलाई नरोक। किनभने परमेश्‍वरको राज्‍य यस्‍तैहरूको हो।
कोही एक जना शासकले येशूलाई यसो भनेर सोधे, “हे असल गुरु, अनन्‍त जीवन पाउनलाई म के गरूँ?”
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिमी मलाई किन असल भन्‍दछौ? एक परमेश्‍वरबाहेक कोही असल छैन।
यो सुनेपछि येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिमीलाई अझ एक कुराको अभाव छ। तिमीसँग भएका जे जति छन्‌ ती सबै बेचेर गरीबहरूलाई बाँड़िदेऊ, र तिमीलाई स्‍वर्गमा धन हुनेछ, र आऊ, र मेरो पछि लाग।”
अनि येशूले तिनलाई हेरेर भन्‍नुभयो, “धन-सम्‍पत्ति हुनेहरूलाई परमेश्‍वरको राज्‍यभित्र प्रवेश गर्नु अति गाह्रो छ,
येशूले बाह्रैलाई अलग्‍गै लगेर भन्‍नुभयो, “हेर, हामी यरूशलेमतिर जाँदैछौं, र मानिसको पुत्रको विषयमा अगमवक्ताहरूले लेखेका हरेक कुरा पूरा हुनेछ।
मानिसहरूले त्‍यसलाई भने, “नासरतका येशू यतैबाट जाँदैहुनुहुन्‍छ।”
तब त्‍यो यसो भन्‍दै करायो, “हे येशू, दाऊदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्‌!”
येशू अड़िनुभयो, र त्‍यसलाई आफूकहाँ ल्‍याउने आज्ञा गर्नुभयो। त्‍यो नजिक आएपछि उहाँले त्‍यसलाई सोध्‍नुभयो,
तब येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “तिमी देख्‍ने भइजाऊ। तिम्रो विश्‍वासले तिमीलाई निको पारेको छ।”
येशू यरीहोमा प्रवेश गरेर त्‍यहाँबाट जाँदैहुनुहुन्‍थ्‍यो।
येशू को हुनुहुँदोरहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्‍थे, तर पुड़को भएका हुनाले भीड़ले गर्दा तिनले देख्‍न सकेनन्‌।
तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अगिअगि दौड़ेर एउटा अञ्‍जीरको रूखमा चढ़े। किनकि येशू त्‍यही बाटो भएर जान लाग्‍नुभएको थियो।
जब येशू त्‍यस ठाउँमा आइपुग्‍नुभयो, तब उहाँले मास्‍तिर हेरेर तिनलाई भन्‍नुभयो, “ए जखायस, चाँड़ो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्‍नुपरेको छ।”
तब येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहामका छोरा हुन्‌।
येशूले यी कुरा भन्‍नुभएपछि उहाँ यरूशलेमतर्फ बढ्‌नुभयो।
चेलाहरूले त्‍यसलाई येशूकहाँ ल्‍याए, र आफ्‍ना वस्‍त्रहरू बछेड़ोमाथि राखेर येशूलाई त्‍यसमाथि बसाए।
जब येशू नजिकै आइपुग्‍नुभयो र सहरलाई देख्‍नुभयो, उहाँ त्‍यसको निम्‍ति रुनुभयो,
तब येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “उसो भए म कुन अधिकारले यी काम गर्दछु, म पनि तिमीहरूलाई भन्‍दिनँ।”
तिनीहरू मौका हेर्न लागे, र धर्मी भई टोपल्‍ने जासूसहरूलाई तिनीहरूले उहाँकहाँ पठाए। येशूले भन्‍नुभएको कुरामा उहाँलाई फसाएर अधिकारीहरू र हाकिमका हातमा उहाँलाई सुम्‍पिदिने दाउमा तिनीहरू थिए।
अब कोही-कोहीले सुन्‍दर-सुन्‍दर ढुङ्गाहरू र दानमा प्राप्‍त भएका सामग्रीहरूले सुसज्‍जित पारिएका मन्‍दिरको विषयमा कुरा गर्न लागे। येशूले भन्‍नुभयो,
येशूले दिउँसो मन्‍दिरमा शिक्षा दिनुहुन्‍थ्‍यो, र रातीचाहिँ निस्‍केर जैतून भनिने डाँड़ामा रात बिताउनुहुन्‍थ्‍यो।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “जब मैले तिमीहरूलाई थैलो र झोली र जुत्ताविना पठाएको थिएँ, के तिमीहरूलाई कुनै कुराको अभाव भयो?” तिनीहरूले भने, “भएन।”
उहाँ बोल्‍दाबोल्‍दै, एउटा भीड त्‍यहाँ आइपुग्‍यो। बाह्र चेलामध्‍ये एक जना यहूदा भन्‍नेचाहिँ तिनीहरूका अगिअगि आयो। येशूलाई चुम्‍बन गर्नलाई त्‍यो उहाँको नजिकै गयो।
तर येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “यहूदा, के तिमी मानिसको पुत्रलाई चुम्‍बनद्वारा विश्‍वासघात गर्न चाहन्‍छौ?”
तर येशूले भन्‍नुभयो, “भयो, अब यसो नगर।” अनि त्‍यस मान्‍छेको कान छोएर उहाँले त्‍यसलाई निको पारिदिनुभयो।
तिनीहरूले येशूलाई पक्रेर लगे, र उहाँलाई प्रधान पूजाहारीको घरमा ल्‍याए। तर पत्रुस टाढ़ैबाट उहाँको पछिपछि लागे।
तब येशूलाई पक्रने मानिसहरूले उहाँलाई गिल्‍ला गरे, र पिटे,
पिलातसले उहाँलाई सोधे, “के तिमी यहूदीहरूका राजा हौ?” येशूले जवाफ दिनुभयो, “तपाईं नै त्‍यसो भन्‍नुहुन्‍छ।”
येशूलाई छोडिदिने इच्‍छा गरेर पिलातसले फेरि तिनीहरूलाई सम्‍झाए।
तिनले त्‍यस मानिसलाई छोडिदिए, जो विद्रोह र हत्‍याको अभियोगमा कारागारमा परेको थियो। त्‍यसैलाई छोडिदिनुहोस्‌ भनेर तिनीहरूले माग गरेका थिए। तर येशूलाई चाहिँ तिनले तिनीहरूको इच्‍छामा सुम्‍पिदिए।
तर तिनीहरूतिर फर्केर येशूले भन्‍नुभयो, “यरूशलेमका छोरी हो, मेरो निम्‍ति नरोओ, तर तिमीहरू आफ्‍नै निम्‍ति र आफ्‍ना छोराछोरीका निम्‍ति रोओ।
अनि येशूले भन्‍नुभयो, “हे पिता, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन्‌ सो जान्‍दैनन्‌।” अनि तिनीहरूले उहाँको वस्‍त्र भाग गरेर चिट्ठा हाले।
तब त्‍यसले भन्‍यो, “हे येशू, तपाईं आफ्‍नो राज्‍यमा आउनुहुँदा मलाई सम्‍झनुहोस्‌।”
उच्‍च सोरले कराएर येशूले भन्‍नुभयो, “हे पिता, म मेरो आत्‍मा तपाईंको हातमा सुम्‍पन्‍छु।” यति भनेर उहाँले आफ्‍नो प्राण त्‍यागिदिनुभयो।
उनले पिलातसकहाँ गएर येशूको लाश मागे,
तर भित्र पस्‍दा तिनीहरूले प्रभु येशूको शरीर पाएनन्‌।
तिनीहरू आपसमा बातचीत गर्दै र बहस गरिरहेको बेला येशू आफै नजिक आएर तिनीहरूका साथ लाग्‍नुभयो,
उहाँले तिनीहरूलाई सोध्‍नुभयो, “कुन कुरा?” तिनीहरूले जवाफ दिए, “येशू नासरीको बारेमा, उहाँ एक जना अगमवक्ता हुनुहुन्‍थ्‍यो, र परमेश्‍वर र सबै मानिसहरूका सामुन्‍ने काम र वचनमा शक्तिशाली हुनुहुन्‍थ्‍यो।
र येशूको शरीर भेट्टाएनन्‌। तिनीहरूले आएर हामीहरूलाई सुनाए, ‘हामीले स्‍वर्गदूतहरूलाई देख्‍यौं, जसले येशू जीवित हुनुहुन्‍छ भने।’
जब येशू तिनीहरूसँग खान बस्‍नुभयो उहाँले रोटी लिएर आशीर्वाद दिनुभयो, र भाँचेर तिनीहरूलाई दिन लाग्‍नुभयो।
तिनीहरूले यी कुरा गर्दागर्दै येशू तिनीहरूका बीचमा खड़ा हुनुभयो, र भन्‍नुभयो, “तिमीहरूलाई शान्‍ति होस्‌।”
किनभने व्‍यवस्‍था मोशाद्वारा दिइयो, अनुग्रह र सत्‍यताचाहिँ येशू ख्रीष्‍टद्वारा आए।
उनले येशूलाई गइरहनुभएको देखेर भने, “हेर, परमेश्‍वरका थुमा!”
उनले भनेका यो कुरा सुनेर ती दुई चेलाहरू येशूको पछि लागे।
येशूले फर्केर हेर्नुभयो, र तिनीहरूलाई पछिपछि आइरहेका देखेर तिनीहरूलाई सोध्‍नुभयो, “तिमीहरू के खोज्‍दैछौ?” तिनीहरूले उहाँलाई भने, “रब्‍बी (जसको अर्थ हो, गुरुज्‍यू), तपाईं कहाँ बस्‍नुहुन्‍छ?”
यूहन्‍नाले भनेका कुरा सुन्‍ने र येशूलाई पछ्याउने ती दुई जनामध्‍ये एक जना सिमोन पत्रुसका भाइ अन्‍द्रियास थिए।
तिनले सिमोनलाई येशूकहाँ ल्‍याए। येशूले उनलाई हेर्नुभयो र भन्‍नुभयो, “तिमी योआनेसको छोरा सिमोन हौ, तिमी केफास (जसको अर्थ हो, चट्टान) भनिनेछौ।”
फिलिपले नथानेललाई भेट्टाएर भने, “जसको विषयमा मोशाले व्‍यवस्‍थामा र अगमवक्ताहरूले पनि लेखेका थिए, योसेफका पुत्र नासरतका येशूलाई हामीले भेट्टाएका छौं।”
येशूले नथानेललाई आफूकहाँ आइरहेका देखेर तिनको विषयमा भन्‍नुभयो, “एक जना पक्‍का इस्राएलीलाई हेर, जसमा कुनै छल छैन।”
नथानेलले सोधे, “तपाईंले मलाई कसरी चिन्‍नुभयो?” येशूले तिनलाई जवाफ दिई भन्‍नुभयो, “फिलिपले तिमीलाई बोलाउन अघि, अञ्‍जीरको रूखमुनि मैले तिमीलाई देखेको थिएँ।”
येशूले तिनलाई जवाफ दिई भन्‍नुभयो “मैले तिमीलाई अञ्‍जीरको रूखमुनि देखें भनेकोले नै तिमी विश्‍वास गर्दछौ? तिमीले यीभन्‍दा अझ ठूला कुराहरू देख्‍नेछौ।”
दाखमद्य सिद्धिएपछि येशूकी आमाले उहाँलाई भनिन्, “तिनीहरूसित दाखमद्य छैन।”
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “हे नारी, मैले के गर्नुपर्छ मलाई नभन्‍नुहोस्‌। मेरो समय अझसम्‍म आएको छैन।”
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “घ्याम्‍पाहरू पानीले भर।” तिनीहरूले घ्याम्‍पाको मुखसम्‍मै पानी भरिदिए।
उहाँका चिन्‍हहरूमध्‍ये यो पहिलो चिन्‍ह येशूले गालीलको कानामा गर्नुभयो। यसरी उहाँले आफ्‍नो महिमा प्रकट गर्नुभयो, अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँमाथि विश्‍वास गरे।
यहूदीहरूको निस्‍तार-चाड नजिकै थियो, र येशू यरूशलेममा जानुभयो।
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “यस मन्‍दिरलाई भत्‍काइदेओ, र म तीन दिनमा यसलाई खड़ा गर्नेछु।”
जब उहाँ मृतकबाट उठाइनुभयो, तब येशूले भन्‍नुभएको यो कुरा चेलाहरूलाई स्‍मरण भयो, र तिनीहरूले धर्मशास्‍त्रमाथि र येशूले बोल्‍नुभएको वचनमाथि विश्‍वास गरे।
तर येशूले आफैलाई तिनीहरूका भरमा छोड्‌नुभएन,
यिनी राती येशूकहाँ आए, र उहाँलाई भने, “गुरुज्‍यू, हामी जान्‍दछौं तपाईं परमेश्‍वरबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्‍छ, किनकि परमेश्‍वर साथमा हुनुभएन भने तपाईंले गर्नुभएका यी चिन्‍हहरू कसैले गर्न सक्‍दैन।”
येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, “साँच्‍चै म तिमीलाई भन्‍दछु, कोही नयाँ गरी जन्‍मेन भने उसले परमेश्‍वरको राज्‍य देख्‍न सक्‍दैन।”
येशूले जवाफ दिनुभयो, “साँच्‍चै म तिमीलाई भन्‍दछु, कोही पानी र आत्‍माद्वारा जन्‍मेन भने परमेश्‍वरको राज्‍यमा पस्‍न सक्‍दैन।
येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, “तिमी इस्राएलका गुरु हौ, र पनि यी कुरा बुझ्‍दैनौ?
यसपछि येशू र उहाँका चेलाहरू यहूदिया देशमा जानुभयो, र त्‍यहाँ तिनीहरूसँग केही दिन वास गर्नुभयो, र बप्‍तिस्‍मा दिनुभयो।
यूहन्‍नाले भन्‍दा येशूले धेरै चेलाहरू बनाउँदैहुनुहुन्‍छ र बप्‍तिस्‍मा पनि दिँदैहुनुहुन्‍छ भन्‍ने फरिसीहरूले सुने।
(वास्‍तवमा येशू आफैले त होइन, तर उहाँका चेलाहरूले बप्‍तिस्‍मा दिन्‍थे।)
जब येशूले यो थाहा पाउनुभयो, उहाँ यहूदिया छोड़ेर फेरि गालीलमा फर्कनुभयो।
त्‍यहाँ याकूबको इनार थियो। येशू यात्राले थाक्‍नुभएको हुनाले त्‍यस इनारको छेउमा बसिरहनुभएको थियो। प्राय: मध्‍यान्‍ह भएको थियो।
एउटी सामरी स्‍त्री पानी भर्न त्‍यहाँ आई। येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “मलाई पानी पिउन देऊ।”
येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “तिमीले परमेश्‍वरको वरदान र तिमीसँग पानी माग्‍ने व्‍यक्तिलाई चिनेकी भए तिमीले उसलाई माग्‍नेथियौ, र उसले तिमीलाई जिउँदो पानी दिनेथियो।”
येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “यो पानी पिउने प्रत्‍येक फेरि तिर्खाउनेछ,
येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “जाऊ, तिम्रो पतिलाई बोलाएर ल्‍याऊ।”
त्‍यस स्‍त्रीले भनी, “मेरो पति छैन।” येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिम्रो पति छैन भनी तिमीले ठीकै भन्‍यौ,
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “ए नारी, मलाई विश्‍वास गर, त्‍यो बेला आउँदैछ, जब तिमीहरू न त यस डाँड़ामा, न यरूशलेममा पिताको आराधना गर्नेछौ।
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिमीसँग बोल्‍ने, म उही हुँ।”
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “मलाई पठाउनुहुनेको इच्‍छाअनुसार गर्नु, र उहाँको काम पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो।
(येशू आफैले गवाही दिनुभयो, कि आफ्‍नो निज देशमा कुनै अगमवक्ताको आदर हुँदैन।)
येशू यहूदियाबाट गालीलमा आउनुभएको छ भन्‍ने सुनेर तिनी उहाँकहाँ गए, अनि तिनको छोरालाई आएर निको पारिदिन भनी उहाँलाई बिन्‍ती गरे, किनकि तिनको छोरो मर्नै आँटेको थियो।
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू चिन्‍ह र अचम्‍मका कामहरू नदेखेसम्‍म कुनै रीतिले विश्‍वास गर्दैनौ।”
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “जाऊ, तिम्रो छोरो बाँच्‍नेछ।” येशूले तिनलाई भन्‍नुभएको वचन ती मानिसले विश्‍वास गरे, र आफ्‍नो बाटो लागे।
येशूले तिनलाई “तिम्रो छोरो बाँच्‍नेछ” भन्‍नुभएको घड़ीदेखि नै हो रहेछ भनी बाबुले थाहा पाए। अनि तिनी आफैले र तिनका सारा परिवारले विश्‍वास गरे।
यहूदियाबाट गालीलमा आएर येशूले गर्नुभएको यो दोस्रो चिन्‍ह थियो।
त्‍यसपछि यहूदीहरूको चाड थियो, र येशू यरूशलेममा जानुभयो।
येशूले त्‍यसलाई त्‍यहाँ पस्रिरहेको देख्‍नुभयो अनि लामो समयदेखि त्‍यो यस दशामा रहेछ भनी जानेर येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “के तिमी निको हुन चाहन्‍छौ?”
येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “खड़ा होऊ, र आफ्‍नो ओछ्यान उठाऊ, र हिँड़।”
तर निको भएको त्‍यस मानिसले उहाँ को हुनुहुन्‍थ्‍यो भनी चिनेको थिएन, किनभने त्‍यस ठाउँमा भीड भएको हुनाले येशू त्‍यहाँबाट गइसक्‍नुभएको थियो।
त्‍यसपछि येशूले त्‍यसलाई मन्‍दिरमा भेट्टाएर भन्‍नुभयो, “हेर, तिमी निको भएका छौ। फेरि पाप नगर, र तिमीमाथि अझ बढ़ी खराबी आई नपरोस्‌।”
उसलाई निको पार्ने त येशू हुनुहुँदोरहेछ भनेर त्‍यस मानिसले गएर यहूदीहरूलाई भनिदियो।
त्‍यसकारणले गर्दा यहूदीहरूले येशूलाई खेदो गर्न लागे, किनभने उहाँले यो काम शबाथ-दिनमा गर्नुभएको थियो।
तब येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “मेरा पिताले अहिलेसम्‍म काम गरिरहनुभएको छ, र म पनि काम गरिरहेछु।”
यसकारण यहूदीहरूले येशूलाई मार्न अझ बढ़ी प्रयत्‍न गर्न लागे, किनकि उहाँले शबाथ-दिन भङ्ग गर्ने काम मात्र होइन, तर आफैलाई परमेश्‍वरको बराबरी तुल्‍याएर उहाँले परमेश्‍वरलाई आफ्‍नै पिता भन्‍नुभएको थियो।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, पुत्र आफैले केही गर्न सक्‍दैन, तर पिताले जे गर्नुभएको देख्‍छ त्‍यही मात्र गर्छ, किनकि पिताले जे गर्नुहुन्‍छ, पुत्रले त्‍यसै गर्छ।
यी कुरापछि येशू गालील, अर्थात्‌ तिबेरियास समुद्रको पारिपट्टि जानुभयो।
येशू डाँड़ामाथि जानुभयो, र आफ्‍ना चेलाहरूसँग त्‍यहाँ बस्‍नुभयो।
तब येशूले आफ्‍ना चारैतिर हेर्दा एउटा ठूलो भीड आफूकहाँ आइरहेको देखेर फिलिपलाई भन्‍नुभयो, “यिनीहरूलाई खुवाउनका निम्‍ति हामीहरूले कहाँबाट रोटी किन्‍ने?”
येशूले भन्‍नुभयो, “मानिसहरूलाई बस्‍न लाओ।” त्‍यहाँ धेरै घाँस भएको चउर थियो। तब प्राय: पाँच हजार पुरुषहरू त्‍यहाँ बसे।
तब येशूले रोटी लिनुभयो, र परमेश्‍वरलाई धन्‍यवाद चढ़ाउनुभएपछि बस्‍नेहरूलाई बाँड़िदिनुभयो, र त्‍यसै गरी माछा पनि बाँड़िदिनुभयो। तिनीहरूले चाहेजति खाए।
तिनीहरू आएर उहाँलाई बलजफतीसँग लगी राजा बनाउन खोज्‍दैछन्‌ भन्‍ने थाहा पाएर येशू फेरि एकलै डाँड़ामा जानुभयो।
र डुङ्गामा चढ़ेर तिनीहरू समुद्र पारि कफर्नहुमतिर जान लागे। त्‍यस बेला अँध्‍यारो भएको थियो, र येशू अझसम्‍म तिनीहरूकहाँ आउनुभएको थिएन।
पाँच-छ किलोमिटर डुङ्गा खियाएर गएपछि तिनीहरूले येशूलाई समुद्रमाथि हिँड़ेर डुङ्गाको नजिक आइरहनुभएको देखे, अनि तिनीहरू डराए।
समुद्र पारि रहेको भीड़ले भोलिपल्‍ट त्‍यहाँ एउटा मात्र डुङ्गा देखे। तिनीहरूलाई थाहा थियो, कि येशू आफ्‍ना चेलाहरूसँग डुङ्गामा चढ्‌नुभएको थिएन, तर उहाँका चेलाहरू मात्र गएका थिए।
येशू र उहाँका चेलाहरू त्‍यहाँ नहुनुभएको थाहा पाएर ती मानिसहरू येशूलाई खोज्‍दै डुङ्गाहरूमा चढ़ेर कफर्नहुममा गए।
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, तिमीहरू चिन्‍हहरू देखेर होइन, तर अघाउञ्‍जेल रोटी खाएको कारणले मलाई खोज्‍दछौ।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “परमेश्‍वरको काम यही हो: जसलाई उहाँले पठाउनुभयो उसमाथि विश्‍वास गर।”
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, तिमीहरूलाई स्‍वर्गबाट रोटी दिने मोशा होइनन्, तर स्‍वर्गबाट तिमीहरूलाई साँचो रोटी दिनुहुने मेरा पिता हुनुहुन्‍छ।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो “जीवनको रोटी म हुँ। मकहाँ आउने भोकाउनेछैन, र ममाथि विश्‍वास गर्ने कहिल्‍यै तिर्खाउनेछैन।
तिनीहरूले भने, “के यो योसेफको छोरो, येशू होइन? यसका बुबा र आमालाई हामी चिन्‍दैनौं र? अहिले यसले कसरी ‘म स्‍वर्गबाट ओर्लिआएको हुँ’ भनी भन्‍दछ?”
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “तिमीहरू आपसमा नगनगनाओ।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ, र उसको रगत पिएनौ भने, तिमीहरूमा जीवन हुँदैन।
तर उहाँका चेलाहरू यस विषयमा गनगनाउँदैछन्‌ भनी जानेर येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “के यी कुरा तिमीहरूका निम्‍ति ठोकरको कारण भइरहेछ?
तर तिमीहरूमध्‍ये कति छन्, जसले विश्‍वास गर्दैनन्‌।” किनभने विश्‍वास नगर्नेहरू को-को हुन्, र उहाँलाई धोका दिने को हुनेछ भनी येशूलाई सुरुदेखि नै थाहा थियो।
येशूले बाह्रैलाई भन्‍नुभयो, “के तिमीहरू पनि मलाई त्‍यागेर जाने?”
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “के म आफैले तिमीहरू बाह्रै जनालाई छानेको होइनँ र? र तिमीहरूमध्‍येको एक जनाचाहिँ दियाबलस हो।”
त्‍यसपछि येशू गालीलमा नै घुमफिर गर्नुभयो, तर उहाँ यहूदियामा जान चाहनुभएन, किनभने यहूदीहरू उहाँलाई मार्ने दाउमा थिए।
यसकारण येशूका भाइहरूले उहाँलाई भने, “यो ठाउँ छाड़ेर यहूदिया जानुहोस्, र तपाईंले गरिरहनुभएका कामहरू तपाईंका चेलाहरूले पनि देखून्‌।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “मेरो उपयुक्त समय अझै आएको छैन, तर तिमीहरूका निम्‍ति त सबै समय उपयुक्त छ।
चाड़को बीचमा येशू मन्‍दिरभित्र पस्‍नुभयो, र शिक्षा दिनुभयो।
तब येशूले जवाफ दिई तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “मेरो शिक्षा मेरै होइन, तर उहाँको हो, जसले मलाई पठाउनुभयो।
येशूले जवाफ दिई तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “एउटा काम मैले गरें, अनि तिमीहरू सबै यसमा आश्‍चर्य मान्‍दछौ।
तब येशूले मन्‍दिरमा सिकाउनुहुँदा, उहाँले उच्‍च स्‍वरले भन्‍नुभयो, “तिमीहरू मलाई चिन्‍छौ, र म कहाँबाट आएको हुँ, त्‍यो पनि जान्‍दछौ। म आफ्‍नै इच्‍छाले आएको होइनँ, तर जसले मलाई पठाउनुभयो उहाँ सत्‍य हुनुहुन्‍छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्‍दैनौ,
येशूले भन्‍नुभयो, “अझ केही समयसम्‍म म तिमीहरूसँग छु, त्‍यसपछि म मलाई पठाउनुहुनेकहाँ जानेछु।
अब चाड़को पछिल्‍लो दिन, अर्थात्‌ चाड़को प्रमुख दिनमा, उभिएर येशूले उच्‍च स्‍वरमा यसो भन्‍नुभयो, “यदि कोही तिर्खायो भने त्‍यो मकहाँ आओस्‌ र पिओस्‌।
तर यो कुरो उहाँले पवित्र आत्‍माको विषयमा भन्‍नुभएको थियो, जुन पवित्र आत्‍मा उहाँमाथि विश्‍वास गर्नेहरूले प्राप्‍त गर्न लागेका थिए। किनकि पवित्र आत्‍मा अहिलेसम्‍म दिइएको थिएन, किनभने येशूको महिमा अझसम्‍म भएको थिएन।
तिनीहरूमध्‍ये एक जना निकोदेमस, जो पहिले एक पल्‍ट येशूकहाँ आएका थिए, तिनले भने,
तर येशू जैतून डाँड़ामा जानुभयो।
तर जब तिनीहरूले यो सुने, तब ठूलादेखि सुरु गरी सानासम्‍म एक-एक गरेर गए, र येशू त्‍यस स्‍त्रीसँग एकलै छोडिनुभयो, अनि त्‍यो स्‍त्रीचाहिँ उहाँको अगि उभिरही।
येशूले त्‍यस स्‍त्रीलाई हेरेर भन्‍नुभयो, “ए नारी, तिनीहरू कहाँ गए? के कसैले तिमीलाई दण्‍ड दिएन?”
त्‍यसले भनी, “प्रभु, कसैले दिएन।” येशूले भन्‍नुभयो, “म पनि तिमीलाई दण्‍ड दिन्‍नँ। जाऊ, अनि फेरि पाप नगर।” ]
येशूले जवाफ दिनुभयो, “म आफ्‍नै विषयमा गवाही दिन्‍छु, तापनि मेरो गवाही सत्‍य छ। म जान्‍दछु, म कहाँबाट आएको हुँ, र म कहाँ गइरहेछु। तर तिमीहरू जान्‍दैनौ, म कहाँबाट आउँछु, वा कहाँ गइरहेछु।
तिनीहरूले उहाँलाई भने, “तिम्रा पिता कहाँ छन्‌?” येशूले जवाफ दिनुभयो, “तिमीहरू न त मलाई चिन्‍छौ न मेरा पितालाई। तिमीहरूले मलाई चिनेका भए मेरा पितालाई पनि चिन्‍नेथियौ।”
तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, “तिमी को हौ त?” येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “म उही हुँ, जो मैले तिमीहरूलाई सुरुदेखि नै भन्‍दैछु।
यसकारण येशूले भन्‍नुभयो, “जब तिमीहरूले मानिसको पुत्रलाई माथि उचाल्‍नेछौ, म उही हुँ भनी तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ, र म आफ्‍नै अधिकारमा केही गर्दिनँ, तर पिताले सिकाउनुभएका कुराहरू बोल्‍दछु भनी जान्‍नेछौ।
येशूले आफूमाथि विश्‍वास गर्ने यहूदीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू साँच्‍चै मेरा चेला हौ।
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, पाप गर्ने प्रत्‍येक पापको कमारो हो।
तिनीहरूले उहाँलाई भने, “हाम्रा पिता त अब्राहाम हुन्‌।” येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू अब्राहामका सन्‍तान हुँदा हौ त, अब्राहामले जे काम गरे त्‍यही गर्नेथियौ।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “परमेश्‍वर तिमीहरूका पिता हुनुहुँदो हो त तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्नेथियौ, किनभने म परमेश्‍वरबाट निस्‍किआएँ। म आफ्‍नै इच्‍छाले आएको होइनँ, तर उहाँले मलाई पठाउनुभयो।
येशूले जवाफ दिनुभयो, “मलाई भूत लागेको छैन, तर म आफ्‍ना पिताको आदर गर्दछु, र तिमीहरू मेरो अनादर गर्दछौ।
येशूले जवाफ दिनुभयो, “यदि मैले आफ्‍नै महिमा गरें भने मेरो महिमा व्‍यर्थै हुन्‍छ। मलाई महिमा दिने मेरा पिता हुनुहुन्‍छ, जसलाई तिमीहरू ‘हाम्रा परमेश्‍वर’ भन्‍दछौ।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, अब्राहाम हुनुभन्‍दा अघिबाटै म छँदैछु।”
तब तिनीहरूले उहाँलाई हान्‍न भनी ढुङ्गा टिपे, तर येशू लुकेर मन्‍दिरबाट बाहिर निस्‍किजानुभयो।
त्‍यहाँबाट जाँदैगर्दा येशूले एक जना जन्‍मैको अन्‍धालाई देख्‍नुभयो।
येशूले जवाफ दिनुभयो, “न त यसले पाप गर्‍यो न यसका आमा-बुबाले, तर यो यस हेतुले भयो कि परमेश्‍वरको काम यस मानिसको जीवनमा प्रकट होस्‌।
त्‍यसले जवाफ दियो, “येशू भन्‍ने एक जना मानिसले माटोको लेप बनाएर मेरा आँखामा लगाइदिएर मलाई भन्‍नुभयो, ‘सिलोआममा जाऊ र पखाल।’ तब गएर मैले पखालें, र म देख्‍ने भएँ।”
जुन दिन येशूले माटोको लेप बनाएर त्‍यसका आँखा खोलिदिनुभएको थियो त्‍यो शबाथ-दिन थियो।
तिनीहरूले त्‍यसलाई बाहिर निकालिदिए भन्‍ने येशूले सुन्‍नुभयो, र त्‍यसलाई भेट्टाएर भन्‍नुभयो, “के तिमी मानिसको पुत्रमाथि विश्‍वास गर्दछौ?”
येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “तिमीले उसलाई देखेका छौ, अनि तिमीसँग बोल्‍ने उही नै हो।”
अनि येशूले भन्‍नुभयो, “म न्‍यायको लागि यस संसारमा आएँ, कि नदेख्‍नेहरूले देखून्‌ र देख्‍नेहरूचाहिँ अन्‍धा होऊन्‌।”
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू अन्‍धा भए ता पापको दोषी हुनेथिएनौ, तर तिमीहरू ‘हामी देख्‍छौं’ भन्‍दछौ, यसकारण तिमीहरूको पाप रहिरहन्‍छ।”
येशूले तिनीहरूलाई यो दृष्‍टान्‍त भन्‍नुभयो, तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभएको कुरा तिनीहरूले बुझेनन्‌।
यसकारण येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, भेड़ाहरूको ढोका मै हुँ।
यो हिउँदको समय थियो। येशू मन्‍दिरभित्र सोलोमनको दलानमा टहलिरहनुभएको थियो।
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको छु, तर तिमीहरू विश्‍वास गर्दैनौ। मेरा पिताको नाउँमा जे काम म गर्दछु, तिनैले मेरो गवाही दिन्‍छन्‌।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “मैले तिमीहरूलाई मेरा पिताबाट धेरै असल काम देखाएँ, तीमध्‍ये कुन कामको निम्‍ति तिमीहरू मलाई ढुङ्गाले हान्‍न चाहन्‍छौ?”
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “के तिमीहरूको व्‍यवस्‍थामा यसो लेखिएको छैन, ‘मैले भनें, तिमीहरू देवहरू हौ’?
यी दुई दिदीहरूले येशूकहाँ यसो भनी समाचार पठाए, “प्रभु, जसलाई तपाईं माया गर्नुहुन्‍छ, तिनी बिरामी छन्‌।”
तर यो सुनेर येशूले भन्‍नुभयो, “यस बिरामीले मृत्‍युमा पुर्‍याउँदैन, तर यो परमेश्‍वरको महिमाको निम्‍ति हो, ताकि यसद्वारा परमेश्‍वरका पुत्रको महिमा होस्‌।”
येशूले मार्था, तिनकी बहिनी र लाजरसलाई माया गर्नुहुन्‍थ्‍यो,
येशूले जवाफ दिनुभयो, “के दिनमा बाह्र घण्‍टा हुँदैनन्‌ र? दिनमा हिँड्‌डुल गर्नेलाई ठेस लाग्‍दैन, किनभने तिनले यस संसारको ज्‍योति देख्‍तछन्,
येशूले तिनको मृत्‍युको विषयमा भन्‍नुभएको थियो, तर तिनीहरूले चाहिँ स्‍वाभाविक निद्राको विषयमा भन्‍नुभएको हो भन्‍ठाने।
येशूले तिनीहरूलाई स्‍पष्‍ट भनिदिनुभयो, “लाजरस मरेका छन्‌।
जब येशू आइपुग्‍नुभयो, तब लाजरसलाई चिहानमा राखेको चार दिन भइसकेको थाहा पाउनुभयो।
येशू आइरहनुभएको छ भन्‍ने सुनेर मार्था गइन्‌ र उहाँलाई भेटिन्‌। तर मरियम घरैमा बसिरहिन्‌।
तब मार्थाले येशूलाई भनिन्, “प्रभु, तपाईं यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्नेथिएन।
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिम्रो भाइ फेरि जीवित हुनेछ।”
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “पुनरुत्‍थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्‍वास गर्ने मर्‍यो भने पनि जीवित हुनेछ।
त्‍यस बेलासम्‍म येशू गाउँमा आइपुग्‍नुभएको थिएन, तर उहाँ त्‍यही ठाउँमा हुनुहुन्‍थ्‍यो जहाँ मार्थाले उहाँलाई भेटेकी थिइन्‌।
जब मरियम येशू हुनुभएको ठाउँमा आइन्‌ र उहाँलाई देखिन्, तब यसो भन्‍दै तिनी उहाँका पाउमा परिन्, “हे प्रभु, तपाईं यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्नेथिएन।”
जब येशूले तिनलाई रोइरहेकी र तिनीसँग आउने यहूदीहरू पनि रोइरहेका देख्‍नुभयो, तब उहाँ आत्‍मामा ज्‍यादै व्‍याकुल हुनुभयो अनि अति दुःखित हुनुभयो।
तब येशू फेरि ज्‍यादै व्‍याकुल भएर चिहानमा जानुभयो। यो चिहान एउटा ओढ़ारमा थियो। त्‍यसको मुख एउटा ढुङ्गोले ढाकेको थियो।
येशूले भन्‍नुभयो, “ढुङ्गो हटाओ।” मृत मानिसको दिदी मार्थाले उहाँलाई भनिन्, “हे प्रभु, यस बेलासम्‍म त त्‍यो गन्‍हाउन लागिसक्‍यो होला, किनकि त्‍यो मरेको चार दिन भइसक्‍यो।”
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “के मैले तिमीलाई भनेको होइनँ, ‘तिमीले विश्‍वास गर्‍यौ भने परमेश्‍वरको महिमा देख्‍नेछौ’?”
त्‍यो मृत मानिस त्‍यसको हात-खुट्टा पट्टीले बाँधिएकै र अनुहार लुगाले बेह्रिएकैमा बाहिर निस्‍की आयो। येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “त्‍यसको बन्‍धन खोलिदेओ, र त्‍यसलाई जान देओ।”
मरियमकहाँ आएका धेरै यहूदीहरूले येशूले गर्नुभएको काम देखेर उहाँमाथि विश्‍वास गरे।
तर तिनीहरूमध्‍ये कोहीचाहिँ फरिसीहरूकहाँ गए, र येशूले गर्नुभएका कामहरू बताइदिए।
यो तिनले आफ्‍नै तर्फबाट भनेका थिएनन्, तर त्‍यस वर्षका प्रधान पूजाहारी भएका हुनाले राष्‍ट्रको निम्‍ति येशू मर्नुपर्छ भन्‍ने अगमवाणी बोलेका हुन्‌।
यसैकारण येशू फेरि यहूदीहरूका बीचमा खुल्‍लमखुल्‍ला हिँड्‌डुल गर्नुभएन, तर त्‍यहाँबाट उजाड-स्‍थानको नजिकमा रहेको एफ्राइम भन्‍ने सहरमा जानुभयो, र त्‍यहाँ चेलाहरूसँग बस्‍नुभयो।
तब तिनीहरूले येशूलाई खोजे, अनि तिनीहरू मन्‍दिरमा खड़ा हुँदा आपसमा भन्‍न लागे, “तिमीहरूलाई कस्‍तो लाग्‍छ, के उनी चाड़मा आउलान्‌?”
मुख्‍य पूजाहारीहरू र फरिसीहरूले चाहिँ येशूलाई पक्रन उहाँ कहाँ हुनुहुन्‍छ भनी कसैले थाहा पाए खबर गर्नू भन्‍ने आज्ञा दिएका थिए।
निस्‍तार-चाड़को छ दिनअघि येशू बेथानियामा आउनुभयो। त्‍यहाँ लाजरस बस्‍थे, जसलाई येशूले मृतकबाट जीवित पार्नुभएको थियो।
तब मरियमले आधा लिटर जति कीमती जटामसीको सुगन्‍धित अत्तर ल्‍याएर येशूका पाउमा मलिन्, अनि उहाँका पाउ आफ्‍ना केशले पुछिन्, र अत्तरको बास्‍नाले घर भरियो।
येशूले भन्‍नुभयो, “यिनलाई केही नभन, मेरो दफन-दिनको लागि यिनलाई त्‍यो राखिछोड्‌न देऊ।
यहूदीहरूको एउटा ठूलो भीड़ले उहाँ त्‍यहाँ हुनुहुन्‍छ भन्‍ने थाहा पायो, र येशूको खातिरमा मात्र होइन, तर उहाँले मृतकबाट जीवित पार्नुभएको लाजरसलाई पनि हेर्न भनी तिनीहरू आएका थिए।
किनभने तिनैले गर्दा यहूदीहरूमध्‍ये धेरै जना छुटिएर गई येशूमाथि विश्‍वास गर्न लागेका थिए।
भोलिपल्‍ट चाड़मा आउने ठूलो भीड़ले येशू यरूशलेममा आउँदैहुनुहुन्‍छ भन्‍ने सुन्‍यो,
अनि गधाको एउटा बछेड़ो भेट्टाएर येशू त्‍यसमाथि चढ्‌नुभयो, जस्‍तो लेखिएको छ,
यी कुराहरू उहाँका चेलाहरूले पहिले बुझेनन्‌। तर येशूको महिमा भएपछि यी कुरा उहाँको विषयमा लेखिएका थिए, र यी काम उहाँको निम्‍ति तिनीहरूले गरेका हुन्‌ भन्‍ने तिनीहरूले सम्‍झे।
तिनीहरू गालीलको बेथसेदा निवासी फिलिपकहाँ आएर यसो भनेर बिन्‍ती गरे, “हजूर, हामी येशूलाई भेट्‌न चाहन्‍छौ।”
फिलिपले गएर अन्‍द्रियासलाई भने, र अन्‍द्रियास र फिलिप गएर येशूलाई भने।
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “मानिसको पुत्रको महिमित हुने समय आइपुगेको छ।
येशूले जवाफ दिनुभयो, “यो आवाज मेरो निम्‍ति भएको होइन, तर तिमीहरूका निम्‍ति हो।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “अझ अलि बेरसम्‍म ज्‍योति तिमीहरूसँग छ। ज्‍योति तिमीहरूसँग छउञ्‍जेल हिँड्‌डुल गर, ताकि अन्‍धकारले तिमीहरूलाई नढाकोस्‌। कोही अन्‍धकारमा हिँड्‌डुल गर्छ भने, त्‍यसले आफू कहाँ गइरहेछु, सो थाहा पाउँदैन।
जबसम्‍म ज्‍योति तिमीहरूसँग छ ज्‍योतिमा विश्‍वास गर, र तिमीहरू ज्‍योतिका सन्‍तान होओ।” यी कुरा भन्‍नुभएपछि, येशू त्‍यहाँबाट जानुभयो, र तिनीहरूबाट लुकेर बस्‍नुभयो।
येशूले उच्‍च स्‍वरले भन्‍नुभयो, “मलाई विश्‍वास गर्नेले मलाई होइन, तर मलाई पठाउनुहुनेमाथि विश्‍वास गर्दछ।
निस्‍तार-चाड़को अघि यस संसारबाट बिदा भएर पिताकहाँ जाने उहाँको समय आइपुग्‍यो भन्‍ने येशूले थाहा पाउनुभयो, अनि संसारमा भएका आफ्‍ना जतिलाई प्रेम गरेर उहाँले तिनीहरूलाई अन्‍त्‍यसम्‍मै प्रेम गर्नुभयो।
पिताले सबै थोक उहाँका हातमा दिनुभएको छ, र उहाँ परमेश्‍वरको तर्फबाट आउनुभएको हो, र परमेश्‍वरकहाँ नै जाँदैहुनुहुन्‍छ भन्‍ने कुरा येशूले जान्‍नुहुँदथियो।
येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, “म के गर्दैछु तिमी अहिले जान्‍दैनौ, तर पछि बुझ्‍नेछौ।”
पत्रुसले उहाँलाई भने, “तपाईंले मेरा गोडा कहिल्‍यै धुनुहुनेछैन।” येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, “मैले धोइदिइनँ भनेता मसित तिम्रो केही हिस्‍सा हुनेछैन।”
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “नुहाइसकेको मानिसलाई गोडाबाहेक अरू केही धुनुपर्दैन, त्‍यो सम्‍पूर्ण शुद्ध छ। अनि तिमीहरू शुद्ध छौ, तर सबै त होइन।”
यी कुरा भनेपछि येशू आत्‍मामा व्‍याकुल हुनुभयो र उहाँले गवाही दिई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, तिमीहरूमध्‍ये एक जनाले मलाई पक्राइदिनेछ।”
उहाँका चेलाहरूमध्‍ये येशूले प्रेम गर्नुहुने चेलाचाहिँ येशूको छातीमा अड़ेस लागिरहेका थिए।
येशूको छातीमा त्‍यसरी अड़ेस लागेर नै तिनले उहाँलाई सोधे, “प्रभु, त्‍यो को हो?”
येशूले जवाफ दिनुभयो, “जसलाई म रोटीको टुक्रा चोपेर दिन्‍छु, त्‍यो त्‍यही हो।” तब उहाँले रोटीको टुक्रा चोप्‍नुभयो, र निकालेर त्‍यो सिमोनको छोरो यहूदा इस्‍करियोतलाई दिनुभयो।
रोटीको टुक्रा लिएपछि शैतान त्‍यसभित्र पस्‍यो। तब येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “तिमीलाई जे गर्नु छ, सो चाँड़ै गरिहाल।”
किनभने कसै-कसैले यो सोचे, कि यहूदासँग पैसाको थैलो छ, यसैले येशूले त्‍यसलाई चाड़को निम्‍ति चाहिएको सामग्री किनोस्, अथवा त्‍यसले गरीबहरूलाई केही देओस्‌ भन्‍नुभएको हो।
जब त्‍यो बाहिर गयो तब येशूले भन्‍नुभयो, “अब मानिसको पुत्र महिमित भएको छ, र परमेश्‍वर उसमा महिमित हुनुभएको छ।
सिमोन पत्रुसले उहाँलाई भने, “हे प्रभु, तपाईं कहाँ जाँदैहुनुहुन्‍छ?” येशूले जवाफ दिनुभयो, “म जहाँ गइरहेछु, तिमी अहिले मलाई पछ्याउन सक्‍दैनौ, तर पछि त तिमीले मलाई पछ्याउनेछौ।”
येशूले जवाफ दिनुभयो, “के तिमी आफ्‍नो प्राण मेरो निम्‍ति दिनेछौ? साँच्‍चै म तिमीलाई भन्‍छु, तिमीले मलाई तीन पल्‍ट इन्‍कार नगरेसम्‍म भाले बास्‍नेछैन।”
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “बाटो, सत्‍य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताकहाँ आउन सक्‍दैन।
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “फिलिप, यतिको समयसम्‍म म तिमीहरूसँग छु, तैपनि तिमीले मलाई चिन्‍दैनौ? जसले मलाई देखेको छ, त्‍यसले पितालाई देखेको छ। तिमी कसरी भन्‍न सक्‍छौ, ‘हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्‌?’
येशूले तिनलाई जवाफ दिई भन्‍नुभयो, “जसले मलाई प्रेम गर्छ, त्‍यसले मेरो वचन पालन गर्नेछ, र मेरा पिताले त्‍यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ, र हामी त्‍यसकहाँ आउनेछौं, र त्‍यससँग वास गर्नेछौं।
तिनीहरूले उहाँलाई सोध्‍ने इच्‍छा गर्दैछन्‌ भन्‍ने येशूलाई थाहा भयो, र उहाँले भन्‍नुभयो, “‘अलि बेरपछि तिमीहरू मलाई देख्‍नेछैनौ, अनि अलि बेरपछि मलाई देख्‍नेछौ’ भन्‍ने कुराको अर्थ के हो भन्‍ने विषयमा के तिमीहरू आपसमा बहस गरिरहेछौ?
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “के तिमीहरू अब विश्‍वास गर्दछौ?
यी कुरा भनिसक्‍नुभएपछि येशूले स्‍वर्गतिर आँखा उचाली भन्‍नुभयो, “हे पिता, समय आइपुगेको छ, तपाईंका पुत्रको महिमा प्रकट गर्नुहोस्, र पुत्रले तपाईंको महिमा प्रकट गरोस्‌।
अब अनन्‍त जीवन यही हो, कि तिनीहरूले तपाईं, एकमात्र सत्‍य परमेश्‍वरलाई चिनून्, र तपाईंले पठाउनुभएको येशू ख्रीष्‍टलाई चिनून्‌।
यी कुरा भनिसकेर येशू आफ्‍ना चेलाहरूसँग किद्रोन खोल्‍सापारि जानुभयो। त्‍यहाँ एउटा बगैँचा थियो। येशू आफ्‍ना चेलाहरूसँग त्‍यहाँ प्रवेश गर्नुभयो।
उहाँलाई पक्राइदिने यहूदाले पनि त्‍यो ठाउँ चिनेको थियो, किनभने येशू आफ्‍ना चेलाहरूसँग त्‍यहाँ धेरैजसो भेला हुनुहुन्‍थ्‍यो।
तब आफूमाथि आइपर्ने सबै कुरा थाहा पाएर येशू अगि आउनुभयो, र तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू कसलाई खोज्‍दैछौ?”
तिनीहरूले उहाँलाई भने, “नासरतका येशूलाई।” येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “म उही हुँ।” अब उहाँलाई पक्राइदिने यहूदा पनि तिनीहरूसँगै उभिरहेको थियो।
फेरि उहाँले तिनीहरूलाई सोध्‍नुभयो, “तिमीहरू कसलाई खोज्‍दैछौ?” तिनीहरूले भने, “नासरतका येशूलाई।”
येशूले जवाफ दिनुभयो, “मैले तिमीहरूलाई भनिहालें, म उही हुँ। यसकारण यदि तिमीहरू मलाई खोज्‍दैछौ भने यी मानिसहरूलाई चाहिँ जान देओ।”
येशूले पत्रुसलाई भन्‍नुभयो, “तरवार म्‍यानमा हाल। के पिताले मलाई दिनुभएको कचौरा म नपिऊँ?”
त्‍यसपछि सिपाहीहरूको दल, तिनीहरूका कप्‍तान, र यहूदीहरूका पहरेदारहरूले येशूलाई पक्रे, र उहाँलाई बाँधे।
सिमोन पत्रुस र येशूका अर्का एक जना चेला येशूको पछि लागे। ती अर्काचाहिँ चेला प्रधान पूजाहारीका चिनारु थिए, र येशूसँगै प्रधान पूजाहारीको आँगनमा पसे।
अब प्रधान पूजाहारीले येशूलाई उहाँका चेलाहरू र उहाँका शिक्षाका विषयमा सोधे।
येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, “मैले संसारलाई खुल्‍लमखुल्‍ला भनेको छु। मैले सधैँ सभाघरमा र मन्‍दिरमा शिक्षा दिएको छु, जहाँ सबै यहूदीहरू भेला हुन्‍छन्‌। मैले गुप्‍तमा केही भनेको छैनँ।
येशूले यी कुरा भन्‍नुहुँदा नजिकमा उभिएका पहरेदारहरूमध्‍ये एक जनाले यसो भन्‍दै येशूलाई थप्‍पड़ लायो, “के प्रधान पूजाहारीलाई यसरी जवाफ दिन्‍छस्‌?”
येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “मैले बेठीक भनेको भए त्‍यसको प्रमाण देऊ, तर यदि मैले ठीकै भनेको हुँ भने मलाई किन हिर्काउँछौ?”
तब तिनीहरूले येशूलाई कैयाफाको घरबाट महलतिर लगे। त्‍यति बेला बिहानपख थियो। बिटुलिएर निस्‍तार-चाड़को भोज खान पाउँदैनौं भन्‍ने डरले तिनीहरू महलभित्र पसेनन्‌।
पिलातस फेरि महलभित्र पसे, र उनले येशूलाई बोलाएर भने, “के तिमी यहूदीहरूका राजा हौ?”
येशूले जवाफ दिनुभयो, “तपाईं आफै यसो भन्‍नुहुन्‍छ, वा मेरो विषयमा तपाईंलाई अरू कसैले भने?”
येशूले जवाफ दिनुभयो, “मेरो राज्‍य यस संसारको होइन। मेरो राज्‍य यस संसारको हुँदो हो त मेरा सेवकहरू मेरो निम्‍ति लड्‌नेथिए, र म यहूदीहरूका हातमा पर्नेथिइनँ। तर मेरो राज्‍य यस संसारको होइन।”
पिलातसले उहाँलाई सोधे, “के तिमी राजा नै हौ त?” येशूले जवाफ दिनुभयो, “म राजा हुँ भनी तपाईं नै भन्‍नुहुन्‍छ। यसैको निम्‍ति म जन्‍मेको हुँ, र यसैको निम्‍ति सत्‍यको गवाही दिन म यस संसारमा आएको हुँ। प्रत्‍येक जो सत्‍यको पक्षमा छ, त्‍यसले मेरो सोर सुन्‍छ।”
तब पिलातसले येशूलाई लगेर कोर्रा लाउन लाए।
तब काँढ़ाको मुकुट र बैजनी रङ्गको वस्‍त्र पहिरिएका येशू बाहिर आउनुभयो, र पिलातसले तिनीहरूलाई भने, “हेर, यो मानिस!”
उनी फेरि महलभित्र पसे र येशूलाई सोधे, “तिमी कहाँका हौ?” तर येशूले उनलाई केही जवाफ दिनुभएन।
येशूले जवाफ दिनुभयो, “तपाईंलाई माथिबाट नदिइएको भए ममाथि तपाईंको केही अधिकार हुनेथिएन। यसकारण मलाई तपाईंका हातमा सुम्‍पिदिने अझ बढ़ी पापको दोषी छ।”
पिलातसले यी कुरा सुनेर येशूलाई बाहिर ल्‍याए, र उनी “ढुङ्गाका पाटी” भनिने ठाउँमा (जसलाई हिब्रूमा गब्‍बथा भनिन्‍छ) न्‍याय आसनमा बसे।
तब उनले उहाँलाई क्रूसमा टाँग्‍न तिनीहरूका हातमा सुम्‍पिदिए। यसकारण सिपाहीहरूले येशूलाई जिम्‍मा लिए।
त्‍यहाँ तिनीहरूले उहाँलाई क्रूसमा टाँगे र उहाँसँग अरू दुई जनालाई टाँगे, एक जनालाई एकापट्टि र अर्कालाई अर्कोपट्टि, अनि माझमा येशूलाई।
पिलातसले एउटा दोष-पत्र पनि लेखे, अनि क्रूसमाथि टाँसिदिए। त्‍यसमा यही लेखिएको थियो, “नासरतका येशू, यहूदीहरूको राजा।”
अब धेरै यहूदीहरूले यो दोष-पत्र पढ़े, किनभने येशू क्रूसमा टाँगिनुभएको ठाउँ सहरको नजिकै थियो। यो हिब्रू, ल्‍याटिन र ग्रीक भाषामा लेखिएको थियो।
जब सिपाहीहरूले येशूलाई क्रूसमा टाँगे, तब तिनीहरूले उहाँका वस्‍त्र लिएर प्रत्‍येक सिपाहीलाई एक-एक भाग हुने गरी चार भाग गरे। उहाँको बाहिरी वस्‍त्र पनि लिए, तर त्‍यो वस्‍त्रचाहिँ सिउनी नभएको माथिदेखि तलसम्‍मै बुनेको सग्‍लो थियो।
यसकारण सिपाहीहरूले यो काम गरे। अनि येशूको क्रूसको नजिक उहाँकी आमा, उहाँकी आमाकी बहिनी, क्‍लोपासकी पत्‍नी मरियम र मरियम मग्‍दलिनी उभिरहेका थिए।
जब येशूले आफ्‍नी आमालाई र उहाँले माया गर्नुहुने चेला नजिकमा उभिरहेका देख्‍नुभयो, तब उहाँले आफ्‍नी आमालाई भन्‍नुभयो, “नारी, हेर्नुहोस्, तपाईंको छोरो!”
यसपछि येशूले सबै कुरा अब सिद्धिए भनी जानेर धर्मशास्‍त्र पूरो होस्‌ भनी भन्‍नुभयो, “मलाई तिर्खा लाग्‍यो।”
जब येशूले सिर्का लिनुभयो, तब उहाँले भन्‍नुभयो, “अब सिद्धियो,” र उहाँले शिर निहुराएर आफ्‍नो आत्‍मा त्‍यागिदिनुभयो।
जब तिनीहरू येशूकहाँ आए तिनीहरूले देखे, कि उहाँको मृत्‍यु अघि नै भइसकेको रहेछ, र उहाँका खुट्टा भाँचेनन्‌।
त्‍यसपछि अरिमाथियाको योसेफ, जो यहूदीहरूको डरले गर्दा गुप्‍तमा मात्र येशूका चेला थिए, तिनले पिलातसलाई येशूको मृत शरीर लैजान पाऊँ भनी बिन्‍ती गरे। पिलातसले अनुमति दिए। तब तिनले आएर उहाँको मृत शरीर लगे।
यसरी तिनीहरूले येशूको शरीर यहूदीहरूको दफन-कार्यको रीतिअनुसार सुगन्‍धित द्रव्‍यसँग सूती कपड़ामा बाँधे।
किनकि यहूदीहरूका तयारीको दिन थियो, अनि त्‍यो चिहान पनि नजिकै थियो, र तिनीहरूले येशूलाई त्‍यही चिहानमा राखे।
तिनी सिमोन पत्रुस र येशूले माया गर्नुहुने अर्को चेलाकहाँ दगुरेर गइन्, र तिनीहरूलाई भनिन्, “तिनीहरूले प्रभुलाई चिहानबाट बाहिर लगेछन्, र उहाँलाई कहाँ राखेका छन्, सो हामी जान्‍दैनौं।”
र जहाँ येशूको मृत शरीर राखिएको थियो, त्‍यहाँ सेता वस्‍त्र लाएका दुई स्‍वर्गदूतहरूलाई, एक जना शिरतिर र अर्का पाउतिर बसिरहेका तिनले देखिन्‌।
यी कुरा भनेर तिनी पछिल्‍तिर फर्किन्, र तिनले येशूलाई उभिरहनुभएको देखिन्, तर येशू नै हुनुहुन्‍छ भनी चिनिनन्‌।
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “नारी, तिमी किन रुँदैछ्यौ? कसलाई खोज्‍छ्यौ?” तिनले उहाँलाई माली भन्‍ठानेर भनिन्, “हजूर, तपाईंले उहाँलाई यहाँबाट लैजानुभएको भए, कहाँ राख्‍नुभएको छ मलाई भन्‍नुहोस्, र म उहाँलाई लैजानेछु।”
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “मरियम!” तिनले फर्केर उहाँलाई हिब्रूमा भनिन्, “रब्‍बोनी,” अर्थात्‌ “हे गुरुज्‍यू!”
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “मलाई नछोऊ, किनभने म अहिलेसम्‍म पिताकहाँ गएको छैनँ। तर मेरा भाइहरूकहाँ गएर तिनीहरूलाई भनिदेऊ, ‘मेरा पिता र तिमीहरूका पिता, र मेरा परमेश्‍वर र तिमीहरूका परमेश्‍वरकहाँ गइरहेछु’।”
त्‍यही दिन, अर्थात्‌ हप्‍ताको पहिलो दिनको साँझ, जब यहूदीहरूको डरले चेलाहरू ढोकाहरू बन्‍द गरेर भित्र बसेका थिए, येशू आएर तिनीहरूका माझमा उभिनुभयो, र तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरूलाई शान्‍ति!”
तब येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरूलाई शान्‍ति! जसरी पिताले मलाई पठाउनुभयो, त्‍यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु।”
येशू आउनुहुँदा बाह्र जनामध्‍ये एक जना, दिदुमस भन्‍ने थोमाचाहिँ, तिनीहरूसँग थिएनन्‌।
आठ दिनपछि उहाँका चेलाहरू फेरि घरभित्रै थिए। थोमा पनि तिनीहरूसँग थिए। ढोकाहरू बन्‍द थिए, तर येशू भित्र प्रवेश गर्नुभयो, र माझमा उभिएर भन्‍नुभयो, “तिमीहरूलाई शान्‍ति!”
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिमीले मलाई देखेको कारणले ममाथि विश्‍वास गरेका हौ? धन्‍य हुन्‌ तिनीहरू, जसले मलाई देखेका छैनन्, र पनि विश्‍वास गर्छन्‌।”
येशूले अरू धेरै चिन्‍हहरू चेलाहरूका सामुन्‍ने गर्नुभयो, जुनचाहिँ यस पुस्‍तकमा लेखिएका छैनन्‌।
तर यी लेखिएका छन्, कि तिमीहरूले येशू परमेश्‍वरका पुत्र, ख्रीष्‍ट हुनुहुन्‍छ भनी विश्‍वास गर, र विश्‍वासद्वारा उहाँको नाउँमा तिमीहरूलाई जीवन प्राप्‍त होस्‌।
त्‍यसपछि चेलाहरूकहाँ तिबेरियास समुद्रको छेउमा येशूले फेरि आफूलाई प्रकट गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई यसरी प्रकट गर्नुभयो:
बिहान हुन लागेको थियो, येशू किनारमा खड़ा हुनुभयो। तर चेलाहरूले उहाँ येशू नै हुनुहुन्‍छ भनी चिनेनन्‌।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “बालक हो, तिमीहरूसँग केही माछा छ?” तिनीहरूले उहाँलाई उत्तर दिए, “छैन।”
येशूले प्रेम गर्नुहुने चेलाले पत्रुसलाई भने, “उहाँ प्रभु पो हुनुहुँदोरहेछ।” “उहाँ प्रभु हुनुहुँदोरहेछ” भन्‍ने सुनेर सिमोन पत्रुसले आफ्‍नो बाहिरी वस्‍त्र कम्‍मरमा लपेटे, किनभने तिनले वस्‍त्र खोलेका थिए, र समुद्रमा हामफाले।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरूले भर्खरै पक्रेका माछाबाट केही ल्‍याओ।”
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “आएर खाओ।” चेलाहरूमध्‍ये कसैले पनि “तपाईं को हुनुहुन्‍छ?” भनी सोध्‍ने आँट गरेन, किनकि तिनीहरूले उहाँ प्रभु हुनुहुन्‍छ भनी जान्‍दथिए।
येशू आउनुभयो र रोटी लिएर तिनीहरूलाई दिनुभयो, र त्‍यसै गरी माछा पनि दिनुभयो।
मृतकबाट जीवित भइउठ्‌नुभएपछि येशू चेलाहरूकहाँ प्रकट हुनुभएको यो तेस्रो पल्‍ट थियो।
जब तिनीहरूले खाइसके, तब येशूले सिमोन पत्रुसलाई भन्‍नुभयो, “यूहन्‍नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरूभन्‍दा बढ़ी प्रेम गर्दछौ?” तिनले उहाँलाई भने, “ज्‍यू प्रभु, तपाईं जान्‍नुहुन्‍छ, म तपाईंलाई प्रेम गर्छु।” उहाँले तिनलाई भन्‍नुभयो, “मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ।”
उहाँले तिनलाई तेस्रो पल्‍ट भन्‍नुभयो, “यूहन्‍नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ?” पत्रुस दुःखित भए, किनकि उहाँले तेस्रो पल्‍ट तिनलाई “के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ?” भन्‍नुभयो। तिनले उहाँलाई भने, “प्रभु, तपाईं सब कुरा जान्‍नुहुन्‍छ। म तपाईंलाई प्रेम गर्दछु भनी तपाईंलाई थाहा छ।” येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “मेरा भेड़ाहरूलाई खुवाऊ।
पत्रुसले पछि फर्केर हेर्दा येशूले प्रेम गर्नुहुने चेलालाई पछिपछि आउँदैगरेका देखे। यिनले नै बेलुकीको भोजनको बेलामा उहाँको छातीमा ढल्‍केर, “प्रभु, तपाईंलाई पक्राइदिने को हो?” भनी सोधेका थिए।
तिनलाई देखेर पत्रुसले येशूलाई भने, “प्रभु, यिनको चाहिँ के हुने?”
येशूले पत्रुसलाई भन्‍नुभयो, “म नआएसम्‍म तिनी पर्खिरहून्‌ भन्‍ने मेरो इच्‍छा भए पनि तिमीलाई के? तिमी मेरो पछि लाग।”
यसैकारण ती चेला मर्दैनन्‌ भन्‍ने कुरा भाइहरूका बीचमा फैलियो। येशूले तिनी मर्दैनन्‌ भन्‍नुभएको थिएन, तर “म नआएसम्‍म तिनी पर्खिरहून्‌ भन्‍ने मेरो इच्‍छा भए पनि तिमीलाई के?” भन्‍नुभएको थियो।
येशूले अरू पनि धेरै काम गर्नुभयो। तीमध्‍ये प्रत्‍येकको बारेमा लेखिने हो भने, मलाई यस्‍तो लाग्‍छ, कि तिनका विषयमा लेखिएका पुस्‍तकहरू संसारैभरि पनि अटाउने थिएनन्‌।
प्रिय थियोफिलस, येशूले गर्न र सिकाउन थाल्‍नुभएका सबै कुराका विषयमा मेरो पहिलो पुस्‍तकमा मैले लेखेको छु।
आफैले छान्‍नुभएका प्रेरितहरूलाई येशूले पवित्र आत्‍माद्वारा आज्ञा दिनुभएपछि उहाँ स्‍वर्गमा उचाली लगिनुभएको दिनसम्‍मका सबै कुरा त्‍यस पुस्‍तकमा लेखिएका छन्‌।
तिनीहरूले भने, “गालीलका मानिस हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही येशू, जो तिमीहरूबाट स्‍वर्गमा लगिनुभयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्‍वर्गमा जानुभएको देख्‍यौ, त्‍यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ।”
कति जना स्‍त्रीहरू र येशूकी आमा मरियम अनि उहाँका भाइहरूका साथ यिनीहरू सबै एक मनका भएर निरन्‍तर प्रार्थना गरिरहन्‍थे।
“भाइ हो, धर्मशास्‍त्रको वचन पूरा हुनुपर्दथियो, जुन वचन येशूलाई पक्रनेहरूको अगुवा यहूदाको विषयमा दाऊदको मुखबाट अघिबाटै पवित्र आत्‍माले बोल्‍नुभएको थियो।
यसैकारण हाम्रा साथमा रहने मानिसहरूमध्‍ये यस्‍तो एक जना छान्‍नु आवश्‍यक छ, जुन व्‍यक्ति प्रभु येशू हाम्रा बीचमा रही भित्र-बाहिर गर्नुहुँदा सधैँ हामीसँग थियो,
“इस्राएलका मानिस हो, यी कुरा सुन्‍नुहोस्, नासरतका येशू यस्‍ता व्‍यक्ति हुनुहुन्‍थ्‍यो, जसलाई परमेश्‍वरले शक्तिशाली कामहरू, अचम्‍मका कामहरू र चिन्‍हहरूद्वारा तपाईंहरूका सामुन्‍ने प्रमाणित गर्नुभयो। तपाईंहरूलाई थाहै छ कि परमेश्‍वरले तपाईंहरूका बीचमा यी कामहरू उहाँद्वारा गर्नुभएको हो।
परमेश्‍वरले ठहराउनुभएको निश्‍चित योजना र पूर्वज्ञानअनुसार पक्राउ पर्नुभएको यिनै येशूलाई अधर्मी मानिसहरूका हातद्वारा तपाईंहरूले क्रूसमा टाँगेर मार्नुभयो।
यिनै येशूलाई परमेश्‍वरले जीवित पार्नुभयो। यस कुराका हामी सबै साक्षी छौं।
“त्‍यसैकारण इस्राएलको सारा परिवारले यो पक्‍का गरी जानोस्, कि येशू, जसलाई तपाईंहरूले क्रूसमा टाँग्‍नुभयो, परमेश्‍वरले उहाँलाई प्रभु र ख्रीष्‍ट बनाउनुभयो।”
पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, “पश्‍चात्ताप गर, र तिमीहरूका पाप-क्षमाको निम्‍ति येशू ख्रीष्‍टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्‍येकले बप्‍तिस्‍मा लेऊ, र तिमीहरूले पवित्र आत्‍माको वरदान पाउनेछौ।
तब पत्रुसले भने, “सुनचाँदी मसित छैन। तर जे मसित छ, त्‍यही म तँलाई दिन्‍छु। नासरतका येशू ख्रीष्‍टको नाउँमा हिँड्‌!”
अब्राहाम, इसहाक र याकूबका परमेश्‍वर, हाम्रा पुर्खाका परमेश्‍वरले आफ्‍ना सेवक येशूलाई महिमित पार्नुभयो, जसलाई तपाईंहरूले चाहिँ पक्राइदिनुभयो, र पिलातसले उहाँलाई छोडिदिने विचार गर्दा पनि तपाईंहरूले उहाँलाई उनकै सामने अस्‍वीकार गर्नुभयो।
उहाँको नाउँमाथि गरेको विश्‍वासले र उहाँकै नाउँले तपाईंहरूले देखेका र जानेका यस मानिसलाई बलियो तुल्‍यायो। येशूबाट पाएको विश्‍वासले यस मानिसलाई तपाईंहरू सबैका सामुन्‍ने पूरा निको पार्‍यो।
र उहाँले तपाईंहरूका निम्‍ति अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको ख्रीष्‍ट, अर्थात्‌ येशूलाई पठाइदिनुहुन्‍छ।
उनीहरू रिसाएका थिए, किनकि येशूमा पुनरुत्‍थान हुन्‍छ भन्‍ने कुरा तिनीहरूले मानिसहरूलाई सिकाउँदैथिए र घोषणा गर्दैथिए।
तपाईंहरू सबैलाई र इस्राएलका सारा मानिसलाई थाहा होस्, कि तपाईंहरूले क्रूसमा टाँग्‍नुभएको र परमेश्‍वरले मृतकबाट जीवित पार्नुभएका, उनै नासरतका येशू ख्रीष्‍टको नाउँमा यो मानिस तपाईंहरूका सामुन्‍ने निको भएर उभिएको छ।
जब तिनीहरूले पत्रुस र यूहन्‍नाको साहस देखे, र यिनीहरू अशिक्षित र साधारण मानिसहरू रहेछन्‌ भनी थाहा पाए, तब तिनीहरू छक्‍क परे, र यिनीहरू येशूको साथमा रहन्‍थे भन्‍ने तिनीहरूले थाहा पाए।
अनि यिनीहरूलाई बोलाएर “अब उप्रान्‍त येशूको नाउँमा नबोल्‍नू र कुनै शिक्षा नदिनू” भनी तिनीहरूले आज्ञा दिए।
किनभने साँच्‍चै तपाईंले अभिषेक गर्नुभएका, तपाईंका पवित्र सेवक येशूको विरुद्धमा हेरोद र पन्‍तियस पिलातस दुवै जना, अन्‍यजाति र इस्राएलीहरूसँग यसै सहरमा भेला भएका थिए।
र निको पार्नलाई तपाईंले आफ्‍नो बाहुली फैलाउनुहुँदा, आफ्‍ना पवित्र सेवक येशूको नाउँद्वारा चिन्‍ह र आश्‍चर्य कामहरू होऊन्‌।”
ती प्रेरितहरूले बड़ो शक्तिसाथ प्रभु येशूका पुनरुत्‍थानको गवाही दिन्‍थे, र तिनीहरू सबैमाथि ठूलो अनुग्रह रहेको थियो।
हाम्रा पिता-पुर्खाका परमेश्‍वरले येशूलाई मृतकबाट जीवित पार्नुभयो, जसलाई तपाईंहरूले काठमा टाँगेर मार्नुभएको थियो।
तब उनीहरूले तिनका सल्‍लाह माने। अनि उनीहरूले प्रेरितहरूलाई भित्र बोलाएर पिटे, र “येशूको नाउँमा नबोल्‍नू” भन्‍ने आज्ञा दिई तिनीहरूलाई छोडिदिए।
तब येशूको नाउँमा अपमान सहने योग्‍यका ठहरियौं भन्‍ने कुरामा आनन्‍द मनाउँदै तिनीहरू महासभाको उपस्‍थितिबाट निस्‍केर गए।
अनि हरेक दिन तिनीहरूले मन्‍दिरमा र घर-घरमा गएर येशू नै ख्रीष्‍ट हुनुहुन्‍छ भनी सिकाउन र प्रचार गर्न छोड़ेनन्‌।
किनभने यसले यसो भनेको हामीले सुन्‍यौं, ‘नासरतका येशूले यस ठाउँलाई नाश गर्नेछ, र मोशाले हामीलाई दिएका रीतिथिति पनि बदली गरिदिनेछ’।”
तर तिनले चाहिँ पवित्र आत्‍माले भरिपूर्ण भईकन स्‍वर्गतिर एकटक लाएर हेरे, र परमेश्‍वरको महिमा र येशूलाई परमेश्‍वरको दाहिनेपट्टि उभिरहनुभएको देखे।
जसै तिनीहरूले स्‍तिफनसमाथि ढुङ्गा हानिरहेका थिए, तिनले प्रार्थना गरे, “हे प्रभु येशू, मेरो आत्‍मालाई ग्रहण गर्नुहोस्‌।”
तर जब तिनीहरूले परमेश्‍वरको राज्‍य र येशू ख्रीष्‍टको नाउँको सुसमाचार सुनाउने फिलिपका कुरामा विश्‍वास गरे, तब पुरुष र स्‍त्रीहरूले बप्‍तिस्‍मा लिए।
किनकि त्‍यतिञ्‍जेलसम्‍म तिनीहरूमध्‍ये कुनैमाथि पनि उहाँ आउनुभएको थिएन। तिनीहरूको बप्‍तिस्‍मा प्रभु येशूको नाउँमा मात्र भएको थियो।
तब फिलिपले आफ्‍नो मुख खोलेर धर्मशास्‍त्रको यसै खण्‍डबाट तिनलाई येशूको सुसमाचार सुनाए।
फिलिपले भने, “यदि सारा हृदयले नै विश्‍वास गर्नुहुन्‍छ भने तपाईंले बप्‍तिस्‍मा लिन सक्‍नुहुन्‍छ।” तिनले जवाफ दिए “येशू ख्रीष्‍ट नै परमेश्‍वरका पुत्र हुनुहुन्‍छ भनी म विश्‍वास गर्दछु।”]
तिनले भने, “प्रभु, तपाईं को हुनुहुन्‍छ?” अनि उहाँले भन्‍नुभयो, “म येशू हुँ, जसलाई तिमी सताउँदैछौ।
तब हननिया गएर त्‍यस घरभित्र पसे, र तिनीमाथि आफ्‍ना हात राखेर भने, “भाइ शाऊल, जुन प्रभु येशू तिमी आइरहेको बाटोमा तिमीकहाँ देखा पर्नुभएको थियो, उहाँले नै तिमीले दृष्‍टि पाऊ र तिमी पवित्र आत्‍माले भरिपूर्ण होऊ भनी मलाई पठाउनुभएको छ।”
अनि तुरुन्‍तै तिनले सभाघरहरूमा येशूको घोषणा यसरी गरे, “उहाँ परमेश्‍वरका पुत्र हुनुहुन्‍छ।”
तर शाऊल अझ बढ़ी शक्तिशाली हुँदैगए, र येशू नै ख्रीष्‍ट हुनुहुन्‍छ भन्‍ने प्रमाण दिएर दमस्‍कसमा रहने यहूदीहरूलाई अकमक्‍क पारिदिए।
तर बारनाबासले तिनलाई साथमा लिएर प्रेरितहरूकहाँ लगे। अनि शाऊलले प्रभुलाई बाटोमा देखेका र प्रभु तिनीसँग बोल्‍नुभएको र तिनले दमस्‍कसमा साहससित येशूको नाउँमा प्रचार गरेका कुरा तिनीहरूलाई बताइदिए।
पत्रुसले त्‍यसलाई भने, “ए एनियास, येशू ख्रीष्‍टले तिमीलाई निको पार्नुहुन्‍छ। उठ, र तिम्रो ओछ्यान मिलाऊ।” अनि त्‍यो तुरुन्‍तै उठिहाल्‍यो।
कि परमेश्‍वरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्‍मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ सुकर्म गर्दै र दियाबलसबाट पेलिएकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्‌नुभयो, किनकि परमेश्‍वर उहाँको साथमा हुनुहुन्‍थ्‍यो।
अनि तिनले तिनीहरूलाई येशू ख्रीष्‍टको नाउँमा बप्‍तिस्‍मा दिनू भनी आज्ञा गरे। तब तिनीहरूले पत्रुसलाई केही दिन त्‍यहीँ रहनुहोस्‌ भनी अनुरोध गरे।
प्रभु येशू ख्रीष्‍टमाथि विश्‍वास गर्दा परमेश्‍वरले हामीलाई जुन वरदान दिनुभयो, तिनीहरूलाई पनि त्‍यही वरदान दिनुभएपछि परमेश्‍वरलाई रोक्‍न सक्‍ने म को हुँ र?”
तर तिनीहरूमध्‍ये कोही-कोही साइप्रस र कुरेनीका मानिसहरू थिए। तिनीहरूले एन्‍टिओखियामा आएर ग्रीकहरूलाई पनि प्रभु येशू प्रचार गरे।
जब तिनीहरू समस्‍त टापूको यात्रा गर्दै पाफोससम्‍म आइपुगे, तब त्‍यहाँ तिनीहरूले एक जना यहूदी झूटा अगमवक्ता बार-येशू भन्‍ने एक जना जादूगरलाई भेट्टाए।
“यही मानिसको भावी सन्‍तानबाट, उहाँको प्रतिज्ञाबमोजिम, परमेश्‍वरले इस्राएलको लागि एक मुक्तिदाता, येशूलाई ल्‍याउनुभयो।
अर्थात्, कसरी परमेश्‍वरले येशूलाई जीवित पारी उठाएर त्‍यो कुरो हामी, तिनीहरूका सन्‍तानका निम्‍ति पूरा गरिदिनुभयो, जस्‍तो दोस्रो भजनमा पनि लेखिएको छ, ‘तिमी मेरा पुत्र हौ, आजको दिन मैले तिमीलाई जन्‍माएको छु।’
तर हामी विश्‍वास गर्दछौं, कि प्रभु येशूको अनुग्रहबाट हामीले उद्धार पाएका छौं, जसरी तिनीहरूले पनि पाएका छन्‌।”
यी मानिसहरू यस्‍ता हुन्, जसले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टको खातिर आफ्‍ना प्राण जोखिममा पारेका छन्‌।
माइसियाको साँधमा आएपछि तिनीहरूले बिथिनियातर्फ जाने विचार गरे। तर येशूका आत्‍माले तिनीहरूलाई जान दिनुभएन।
त्‍यसले धेरै दिनसम्‍म यसो गरिरही। तब पावलले झिजो मानेर फनक्‍क फर्की त्‍यस दुष्‍टात्‍मालाई भने, “येशू ख्रीष्‍टको नाउँमा म तँलाई त्‍यसबाट निस्‍कने आज्ञा गर्दछु।” अनि त्‍यो दुष्‍टात्‍मा त्‍यही घड़ी निस्‍किहाल्‍यो।
अनि तिनीहरूले भने, “प्रभु येशू ख्रीष्‍टमा विश्‍वास गर्नुहोस्, र तपाईंले उद्धार पाउनुहुनेछ— तपाईं र तपाईंका परिवारले।”
“ख्रीष्‍टलाई अवश्‍य दुःख भोग्‍नु र मृतकबाट जीवित हुनुपर्थ्‍यो, र यी नै येशू, जसको सुसमाचार म तपाईंहरूलाई सुनाउँछु, उहाँ नै ख्रीष्‍ट हुनुहुन्‍छ” भन्‍ने कुराको अर्थ खोलिकन तिनले प्रमाणित गरिदिए।
तिनीहरू यासोनका पाहुना भएका छन्, र तिनीहरू सबैले येशू भन्‍ने एक जना अर्कै राजा छन्‌ भनेर कैसरका हुकुमको विरुद्ध काम गर्दछन्‌।”
इपिक्‍युरी र स्‍तोइकी दार्शनिकहरूमध्‍ये पनि कतिले तिनीसँग वाद-विवाद गरे। उनीहरू कतिले भने, “यो बकबके के भन्‍छ?” अरूहरूले भने, “अरू कुनै विदेशी देवी-देवताहरूको प्रचार गर्नेजस्‍तो देखिन्‍छ।” किनकि तिनले येशू र मृतकबाट जीवित हुने कुराको प्रचार गर्थे।
जब सिलास र तिमोथी माकेडोनियाबाट आइपुगे, पावल वचनको प्रचारमा व्‍यस्‍त थिए, र यहूदीहरूलाई येशू नै ख्रीष्‍ट हुनुहुन्‍छ भनी तिनले शिक्षा दिँदैथिए।
तिनले प्रभुका मार्गको शिक्षा पाएका थिए, र आत्‍मामा उत्‍साहित भई तिनले येशूका विषयका कुराहरू ठीक-ठीकसँग बोल्‍ने र सिकाउने गर्थे। यद्यपि तिनले यूहन्‍नाको बप्‍तिस्‍मा मात्र जानेका थिए।
किनकि तिनले धर्मशास्‍त्रका वचनद्वारा येशू नै ख्रीष्‍ट हुनुहुन्‍छ भन्‍ने कुरा देखाईकन यहूदीहरूलाई सबैका सामुन्‍ने बिलकुल निरुत्तर तुल्‍याए।
तब पावलले भने, “यूहन्‍नाले दिएको बप्‍तिस्‍माचाहिँ पश्‍चात्तापको बप्‍तिस्‍मा थियो। उनीपछि आउनुहुने व्‍यक्ति, अर्थात्‌ येशूमाथि विश्‍वास गर्नू भनी उनले मानिसहरूलाई बताउँथे।”
यो कुरा सुनेर उनीहरूले प्रभु येशूको नाउँमा बप्‍तिस्‍मा लिए।
तर कुनै-कुनै यताउता घुमफिर गर्ने यहूदी झारफूकेहरूले भूतात्‍मा लागेकाहरूलाई प्रभु येशूको नाउँ उच्‍चारण गर्दै यसो भने, “पावलले प्रचार गरेका येशूद्वारा म तँलाई आज्ञा गर्दछु।”
तब भूतात्‍माले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्‍यो, “येशूलाई म चिन्‍छु, र पावललाई पनि म चिन्‍छु, तर तिमीहरूचाहिँ को हौ?”
यो कुरा एफिसस-निवासी, यहूदी र ग्रीकहरूमा जाहेर भयो। अनि तिनीहरू सबैमाथि डर छायो, र प्रभु येशूको नाउँको प्रशंसा भयो।
यहूदीहरूलाई र ग्रीकहरूलाई पश्‍चात्ताप गरेर परमेश्‍वरपट्टि फर्कनू र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टमाथि विश्‍वास राख्‍नू भन्‍ने कुराको गवाही मैले दिएको छु